Ekpere dị mkpa - IntegritySyndicate.com
Mbido Edemede Okwukwe Ekpere dị mkpa
Jesus onye ekpere
Ike Jizọs nwetara site n'ekpere
Ike ekpere n'Ọlụ Ndịozi
Ntụziaka Jizọs nyere maka ekpere
1. Nna, doo aha gị nsọ
2A. Ka alaeze gị bịa (ka uche gị mee)
2B. Mmụọ nsọ gị bịakwasịrị anyị wee mee ka anyị dị ọcha
3. Nye anyị nri kwa ụbọchị
4. Gbaghara anyị mmehie anyị, n'ihi na anyị onwe anyị na -agbaghara onye ọ bụla ji anyị ụgwọ
5. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa (mana gbapụta anyị n'ihe ọjọọ)
Ikpe ekpere n'ime mmụọ
Na-ekpe ekpere n’akwụsịghị akwụsị
Jizọs dabeere n'ekpere maka inye ike na ịnụ ihe n'ọnụ Chineke. ( Luk 3:21-22, Luk 5:16, Luk 6:12, Luk 9:28, Luk 11:1-4, Luk 22:39-46, Mak 1:35, Mak 6:46 ) Ọ bụ mgbe ahụ. Jizọs nọ na-ekpe ekpere ka Mmụọ Nsọ bịakwasị ya, olu Chineke wee si n’eluigwe bịa. ( Luk 3:21-22 ) Jizọs ga-apụ gaa n’ebe tọgbọrọ n’efu ma kpee ekpere. ( Luk 5:16, Mak 1:35 ) Mgbe ọ nọ n’ala ịkpa, ndị mmụọ ozi nọ na-ejere ya ozi. ( Mak 1:13 ) Mgbe o si n’ọzara pụta, o ji ike mmụọ nsọ lọta. ( Luk 4:14 ) Jizọs na-agakarị n’ugwu na-ekpe ekpere. ( Luk 6:12, Mak 6:46 ) Mgbe ụfọdụ, ọ na-akpọkwa ndị na-eso ụzọ ya gaa n’ugwu ka ha kpee ekpere. ( Luk 9:28 ) Ọ bụ ọrụ ya ịga kpee ekpere n’Ugwu Oliv. ( Luk 22:39-46 ) Ọ ga-anọgide na-ekpegara Chineke ekpere abalị dum. ( Luk 6:12 ) N’oge ndị ọzọ, ọ na-ebili tupu chi ọbụbọ gaa n’ebe tọgbọrọ n’efu, o kpekwara ekpere n’ebe ahụ. ( Mak 1:35 ) Mgbe ọ hụrụ ka a na-eji ụlọ nsọ ahụ eme ihe dị ka ahịa, o were iwe, sị: “E dewo ya n’akwụkwọ nsọ, ‘Ụlọ m ga-abụ ụlọ ekpere.’ ( Luk . 19:46)
Nye Jizọs, ekpere bụ usoro nke iweda onwe gị ala n'ihu Chineke, ịnọ n'okpuru nduzi na ido nsọ site na Mmụọ Nsọ, na-anata mkpughe na ike sitere n'aka Chineke, ịnọgide n'ọnọdụ mgbaghara, na igbochi ọnwụnwa. ( Luk 11:1-4 ) Ebe Jizọs ma na oge ọnwụ jọgburu onwe ya na-eru nso, o gburu ikpere n’ala kpee ekpere ka o guzogide ọnwụnwa ahụ nke ịpụ n’atụmatụ Chineke na-asị, “Nna, ọ bụrụ na ị chọrọ; wepụ iko a n'ebe m nọ. Otú o sina dị, ka e mee uche m, kama ka uche gị mee.” ( Luk 22:39-46 ) N’ihi ekpere a, otu mmụọ ozi sitere n’eluigwe bịakwutere ya, na-ewusi ya ike. ( Luk 22:43 ) N’ịbụ onye ihe mgbu nọ na-enwe, o kpesiri ekpere ike karị. ( Luke 22:44 ) Ndien nte Jesus akayakde uwem esie ọnọ, akpatre ikọ esie ekedi, ‘Ete, nsịn spirit mi nsịn fi ke ubọk!’ ( Luke 23:46 )
Mak 1:13 (Ọpụpụ), Ọ nọ n'ọzara - ndị mmụọ ozi na -ejere ya ozi
13 na ọ nọrọ n'ọzara ụbọchị iri anọ, onye Setan nwara. Ọ nọnyekwaara anụ ọhịa, na ndị mmụọ ozi nọ na -ejere ya ozi.
MAK 1:35 Ọ pua je ebe tọblateọrọ n'efu, kpe ekpere n'ebe ahu
35 na na -ebili n'isi ụtụtụ, mgbe ọchịchịrị ka na -apụ, wee pụọ ruo ebe ndị mmadụ na -adịghị anọ, ma nọrọ ebe ahụ kpee ekpere.
(Mak 6:46) Ọ rịgooro n’elu ugwu ikpe ekpere
46 Mgbe ọ hapụsịrị ha, ọ rịgoro n’elu ugwu ikpe ekpere.
(Luk 3: 21-22) Mgbe Jizọs na-ekpe ekpere, mmụọ nsọ dakwasịrị ya
21 Ugbu a, mgbe e mere mmadụ niile baptizim, Mgbe e mekwara Jizọs baptizim, na -ekpekwa ekpere, eluigwe meghere, 22 Mmụọ Nsọ wee dakwasị ya n'ụdị anụ ahụ, dị ka nduru; olu wee si n'eluigwe bịa, “Ị bụ Ọkpara m nke m hụrụ n'anya; ihe gị masịrị m. ”
Luk 4:14 (NLT) Jizọs lọtara n'ike nke Mmụọ
14 na Jizọs lọtara n'ike nke Mmụọ na Galili, akụkọ banyere ya gbasara na mba niile gbara ya gburugburu.
Luk 5:16 (ESV), HỌ ga -alaghachi ebe ndị mmadụ lara n'iyi wee kpee ekpere
16 ma ọ ga -alaghachi n'ebe ndị mmadụ na -adịghị anọ wee kpee ekpere.
Luk 6:12 (NLT) N'abalị ahụ nile, ọ nọgidere na -ekpegara Chineke ekpere
12 N'ụbọchị ndị a ọ gara n'ugwu ka o kpee ekpere, n'abalị ahụ niile, ọ nọgidere na -ekpeku Chineke ekpere.
Luk 9: 28-29 (HV), He wee kpọrọ ya Pita na Jọn na Jemes wee rịgoro n'elu ugwu ikpe ekpere
28 Ugbu a ihe dị ka ụbọchị asatọ ka okwu ndị a gasịrị ọ kpọọrọ Pita na Jọn na Jemes wee rịgoro n'elu ugwu ikpe ekpere. 29 Ka ọ nọ na -ekpe ekpere, ọdịdị ihu ya gbanwere, uwe ya wee na -acha ezigbo ọcha.
(Luk 11: 1-4) Mgbe ị na -ekpe ekpere, kwuo
1 Ugbu a, Jizọs nọ na -ekpe ekpere n'otu ebe, mgbe ọ gwụchara, otu n'ime ndị na -eso ụzọ ya sịrị ya, "Onyenwe anyị, kụziere anyị ikpe ekpere, dịka Jọn kụziiri ndị na -eso ụzọ ya." 2 O we si ha, “Mgbe ị na -ekpe ekpere, sị:“ Nna, ka e doo aha gị nsọ. Ka alaeze gị bịa. 3 Nye anyị nri kwa ụbọchị, 4 gbaghara anyị mmehie anyị, n'ihi na anyị onwe anyị na -agbaghara onye ọ bụla ji anyị ụgwọ. Ewebàkwala anyị n'ime ọnwụnwa. ”
(Luk 19: 45-46) Edewo ya n'akwukwọ nsọ, 'Ụlọ m ga -abụ ụlọ ekpere'
45 O wee banye n'ụlọ nsọ ma malite ịchụpụ ndị na-ere, 46 na -asị ha, "Edewo ya n'akwukwọ nsọ, 'Ụlọ m ga -abụ ụlọ ekpere' ma unu emewo ya ọgba ndị na -apụnara mmadụ ihe. ”
(Luk 22: 39-46) Ọ bụghị uche m, kama nke gị
39 na ọ na -apụta, na -agakwa n'Ugwu Oliv, dị ka ọ na -eme, ndị na -eso ụzọ ya sokwa ya. 40 Ma mgbe ọ bịarutere ebe ahụ, ọ sịrị ha, “Kpee ekpere ka unu ghara ịba n'ọnwụnwa.” 41 O we si n'ebe ha nọ wezuga ihe dika mb ae nkume ntà, we b knue ikpere n'ala, kpe ekpere, 42 na -asị, “Nna, ọ bụrụ na ị chọrọ, wepụ iko a n'ebe m nọ. Ka o sina dị, ka uche gị mee, ọ bụghị nke m. ” 43 Mọ -ozi we me ka ọ hu ya anya site n'elu -igwe, n strengtheningme ka ọ di ike. 44 Ebe ọ nọkwa n'oké ihe mgbu, o kpesiri ekpere ike; ọsụsọ ya wee dị ka nnukwu mgbada ọbara na -ada n'ala. 45 Mgbe o sikwa n'ekpere bilie, ọ bịakwutere ndị na -eso ụzọ ya wee hụ ha ka ha na -ehi ụra n'ihi mwute. 46 o we si ha, Gini mere unu nāraru ura? Bilie kpee ekpere ka ị ghara ịbanye n'ọnwụnwa. ”
Luk 23:46 (NLT) Nna, n'aka gị ka m na -enye mmụọ m!
46 mgbe ahụ Jisus we were oké olu tie, si, Nna, n'aka -Gi ka M'n commitnye mọm idebe. Mb havinge o kwusiri nka, o we kubìe ume.
Ihe omume karịrị nke mmadụ ga -eme na ndụ Kraist n'oge ekpere gụnyere ngosipụta nke Mmụọ Nsọ, ozi ọgwụgwọ, ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ, mpụta nke ndị mmụọ ozi na nnwogha. (Luk 3: 21-22, Luk 10: 17-24, Luk 22:43) Jizọs kwusiri otite mmanụ na-asị, “Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m.” (Luk 4: 16-21) Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, "N'ezie, n'ezie, asị m unu, unu ga-ahụ ka e meghere eluigwe, hụkwa ndị mmụọ ozi Chineke ka ha na-arịgo ma na-arịdata Nwa nke mmadụ." (Jọn 1:51) Anyị maara ka Chineke si were mmụọ nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ - Ọ gara na -eme ihe ọma wee na -agwọ ndị niile ekwensu na -emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya. (Utom 10: 37-38) Odudu Abasi ama odu ye enye ndikọk udọn̄ọ. (Luk 5:17) A gwọrọ ndị mmụọ na -adịghị ọcha na -enye nsogbu, ìgwè mmadụ ahụ chọkwara imetụ ya aka, n'ihi na ike si n'aka ya pụta wee gwọọ ha niile. (Luk 6: 18-19) Mgbe otu nwanyị metụrụ ọnụ ọnụ uwe ya aka, a gwọrọ ya. (Luk 8:44) N'ihi na Jizọs ghọtara na ike esiwo n'ahụ ya pụta. (Luk 8:46) Jizọs nyere ndị na -eso ụzọ ya ụdị ike na ikike karịrị mmụọ ọjọọ niile na ịgwọ ọrịa na -eziga ha ikwusa alaeze Chineke na ịgwọ ọrịa. (Luk 9: 1-2, Luk 10: 9) Mgbe onye na-eso ụzọ enweghị ike ịchụpụ mmụọ ọjọọ, nzaghachi Jizọs bụ, "Ọ nweghị ihe ọ bụla nwere ike ịchụpụ ụdị a ma e wezụga ekpere." (Mak 9:29)
(Gụọ Luk 3: 21-22.)
1 Ugbu a mgbe emere mmadụ niile baptizim, na mgbe e mekwara Jizọs baptizim na nọ na -ekpe ekpere, eluigwe meghere, 22 Mọ Nsọ we dakwasi ya n'aru aru, dika nduru; otu olu wee si n’eluigwe kwuo, sị, “are bụ Ọkpara m m hụrụ n’anya; gị onwe m nwere obi ụtọ dị ukwuu. ”
(Gụọ Luk 10: 17-24.)
17 Mmadụ iri asaa na abụọ ahụ ji ọṅụ laghachi, sị, "Onyenwe anyị, ọbụna ndị mmụọ ọjọọ na-edo onwe anyị n'okpuru anyị n'aha gị!" 18 O wee sị ha, "Ahụrụ m Setan ka ọ dara ka àmụ̀mà nke si n'eluigwe daa. 19 Lee, enyewo m gị ikike ịzọkwasị agwọ na akpị, na ike nile nke onye iro ahụ, ọ dịghịkwa ihe ga-emerụ gị ahụ. 20 Ka o sina dị, enwela obi ụtọ na nke a, na ndị mmụọ na-edo onwe ha n'okpuru gị, ma na-aṅụrị ọṅụ na edere aha gị n'eluigwe. " 21 N'ime otu awa ahụ ọ rejoụrịrị ọ inụ n'ime Mmụọ Nsọ wee sị, “Ana m ekele gị, Nna, Onyenwe eluigwe na ụwa, na i zonahụwo ndị amamihe na nghọta ihe ndị a wee kpughee ya ụmụntakịrị; e, Nna, maka otu ahụ ka uche amara gị dị. 22 Nna m enyefewo m ihe niile, ọ dịghịkwa onye maara onye Ọkpara ahụ bụ ma e wezụga Nna, ma ọ bụ onye Nna bụ ma e wezụga Ọkpara ahụ na onye ọ bụla Ọkpara ahụ chọrọ ikpughe ya. " 23 Mb turninge O chigharisiri n'ebe ndi n disciplesso uzọ -Ya nọ, Ọ siri, Ngọzi nādiri anya nke nāhu ihe unu nāhu. 24 N'ihi na asim unu, na ọtutu ndi-amuma na ndi-eze nāchọ ihu ihe unu huru, ma ha ahughi ya, na inu ihe unu nānu, ma ha anughi.
(Gụọ Luk 4: 16-21.)
16 O wee bịa Nazaret, ebe ọ nọ too. Dịkwa ka ọ na -eme, ọ gara n'ụlọ nzukọ n'ụbọchị izu ike wee bilie gụọ akwụkwọ. 17 Ewe nye ya akwukwọ Aisaia onye -amuma. O meghere akwụkwọ mpịakọta ahụ wee chọta ebe e dere ya,
ikwusara ndị ogbenye ozi ọma.
iji mee ka ndị a na-emegbu emegbu nwere onwe ha,
19 ịkpọsa afọ ihu ọma Onyenwe anyị. ”
20 O wee mechie akwụkwọ mpịakọta ahụ nyeghachi onye na -ejere ya ozi wee nọdụ ala. Ndị niile nọ n'ụlọ nzukọ ahụ wee legide ya anya. 21 O wee malite ịsị ha,Taa emezuwo Akwụkwọ Nsọ a na ntị gị. "
Luk 5:17 (NLT)
17 N’otu ụbọchị ahụ, ka ọ na -ezi ihe, ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ nọdụrụ ala, ndị si n’obodo nta niile nke Galili na Judia na Jerusalem bịa. Na ike nke Onye -nwe -ayi nọyere ya ime ka aru di ya ike.
(Luk 6: 18-19) Ike si n'aka ya pụta wee gwọọ ha niile
18 ndi biara inu okwu -Ya na igwo ọria nke aru -ha. Ewe me ka aru -ha di ike, bú ndi mọ nādighi ọcha n troubledsob troubledu. 19 Ìgwè mmadụ ahụ niile chọkwara imetụ ya aka, n'ihi na ike si n’ahụ ya pụta wee gwọọ ha niile.
(Gụọ Luk 8: 44-46.)
44 O we bia n'azu -ya, metu ọnu -ọnu uwe -Ya aka, ngwa ngwa orù -ọbara -Ya we kwusi. 45 Jisus we si, Whonye bu onye ahu nke meturum aka? Mgbe mmadụ niile gọnarịrị ya, Pita sịrị, "Nna anyị ukwu, igwe mmadụ gbara gị gburugburu na -achọgide gị!" 46 Ma Jizọs sịrị, “Otu onye bitụrụ m aka, n'ihi na Achọpụtara m na ike esi n'ahụ m pụọ. "
(Gụọ Luk 9: 1-2.)
1 O wee kpọkọta mmadụ iri na abụọ ahụ wee nye ha ike na ikike n'ebe ndị mmụọ ọjọọ niile nọ na ịgwọ ọrịa. 2 o we zipu ha ikwusa ala -eze Chineke na ime ka aru di ha ike.
Luk 10:9 (NLT)
9 Gwọọ ndị ọrịa nọ n'ime ya, sị ha, 'Alaeze Chineke abịaruwo unu nso.'
Luk 22:43 (NLT)
43 Mọ -ozi we me ka ọ hu ya anya site n'elu -igwe, n strengtheningme ka ọ di ike.
37 unu onwe -unu matara ihe mere na Judia dum, malite na Galili mb thee baptism nke Jọn kwusara siri, 38 ka Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ. O wee na -eme ihe ọma, na -agwọkwa ndị niile ekwensu na -emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya.
51 O wee sị ya, “N'ezie, n'ezie, ana m asị gị, ị ga -ahụ ka e meghere eluigwe, hụkwa ndị mmụọ ozi Chineke ka ha na -arịgo ma na -arịdata Nwa nke mmadụ.”
(Mak 9: 28-29)
28 Ma mgbe ọ banyere n'ime ụlọ, ndị na -eso ụzọ ya jụrụ ya na nzuzo, "Gịnị kpatara na anyị enweghị ike ịchụpụ ya?" 29 O we si ha, Ọ dighi ihe ọ bula puru ichupu udi a ma -ọbughi ekpere.
Mgbe mbilite n’ọnwụ nke Kraịst gasịrị, Ndị-ozi nọ na-echere na Jerusalem maka nkwa nke Nna ka e mee ha baptizim na Mmụọ Nsọ na iyikwasị ike sitere n’elu. ( Luk 24:49, Ọrụ 1:4-5 ) Mgbe ha nọ na Jeruselem, ha na-ezukọ n’otu ọnụ ụlọ dị n’elu ebe ha bi. ( Ọrụ 1:12-13 ) Ndịozi ahụ ji otu obi tinye onwe ha n’ekpere, ha na ndị inyom na Meri nne Jizọs, na ụmụnne ya. ( Ọrụ 1:13-14 ) Mgbe ụbọchị Pentikọst rutere, ha niile jupụtara na Mmụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche dị ka mmụọ nsọ nyere ha. ( Ọrụ 2:1-4 ) Nke a bụ mmezu nke ihe e kwuru site n’ọnụ Joel onye amụma, na n’ụbọchị ikpeazụ, Chineke kwuru, sị, M ga-awụkwasị mmụọ m n’ahụ́ anụ ahụ́ nile.’ ( Ọrụ 2:16-18 ) Ndị kweere n’ozi Jizọs tinyere onwe ha n’ozizi ndịozi na mkpakọrịta, n’inyawa achịcha na ekpere dị ka egwu dakwasịrị mkpụrụ obi ọ bụla, a na-emekwa ọtụtụ ihe ebube na ihe ịrịba ama. . ( Ọrụ 2:42-43 ) Ndịozi ahụ tinyere onwe ha n’ekpere na n’ozi nke okwu ahụ. (Ọrụ 6:4)
Mgbe ndịozi bịara ná mmegide, ha weliri olu ha elu nye Chineke ma kpee ekpere maka nkwuwa okwu, na-asị: “Nye ndị ohu gị ka ha nọgide na-ekwu okwu gị n’atụghị egwu nile, mgbe ị na-esetị aka gị ịgwọ ọrịa, na ihe ịrịba ama na ihe ebube dị iche iche. a na-eme ya site n’aha ohu gị dị nsọ bụ́ Jizọs.” ( Ọrụ 4:23-30 ) Mgbe ha kpechara ekpere, ebe ha zukọtara maa jijiji, ha niile jupụtakwara na Mmụọ Nsọ wee nọgide na-ekwu okwu Chineke n’atụghị egwu. ( Ọrụ 4:31 ) Ndịozi ahụ họpụtakwara ndị ozi ma kpee ekpere ma bikwasị ha aka n’isi. ( Ọrụ 6:6 ) Mgbe Sameria natara okwu Chineke, Pita na Jọn gbadara kpee ekpere maka ha ka ha nata mmụọ nsọ. ( Ọrụ 8:14-15 ) Ha bikwasịrị ha aka n’isi wee nata mmụọ nsọ. ( Ọrụ 8:17 ) Mgbe otu nwaanyị aha ya bụ Tabita nwụrụ, Pita gburu ikpere n’ala kpee ekpere; o we che iru n'aru ahu, si, Tabita bilie. ( Ọrụ 9:36-40 ) Mgbe Pita meghere anya ya, ọ kpọrọ ndị nsọ na ndị inyom di ha nwụrụ bụ́ ndị na-egosi na ọ dị ndụ. ( Ọrụ 9:40-41 ) Pọl gwọkwara ndị ọrịa site n’ekpere na ibikwasị aka n’isi. (Ọrụ 28:8-10)
Ọ bụ mgbe Pita nọ n'elu ụlọ na -ekpe ekpere ka ọ hụrụ ọhụụ isoro ndị mba ọzọ kerịta ozi ọma. (Ọrụ 10: 9-19) N'otu aka ahụ, mgbe Kọniliọs, nwoke na-anụ ọkụ n'obi nke na-ekpeku Chineke ekpere mgbe niile, otu mmụọ ozi guzoro n'ihu ya ma duzie ya ka o nyere Pita aka n'ọrụ ya. (Ọrụ 10: 1-2, Ọrụ 10: 30-33) Chineke na-ahazi ozi nke ozi ọma site n'aka ndị ozi ji ekpere kpọrọ ihe. (Ọrụ 14:23)
(Luk 24:49) Ana m ezipụrụ gị nkwa nke Nna m
49 Ma le, M na -ezitere unu nkwa nke Nna m. Ma nọrọnụ n'obodo a ruo mgbe e yikwasịrị unu ike nke si n'elu. "
Ọrụ Ndịozi 1: 4-5a ga -eji mmụọ nsọ mee unu baptism ụbọchị ole na ole site ugbu a
4 Ma mb whilee Ya na ha nānọ, O nyere ha iwu ka ha ghara isi na Jerusalem pua; ma ichere nkwa nke Nna, nke, ọ sịrị, “ị nụrụ n'ọnụ m; 5 n'ihi na Jọn ji mmiri mee baptism, mana a ga -eji mmụọ nsọ mee unu baptism ụbọchị ole na ole site ugbu a. "
Ọrụ 1: 11-14 (NIV) Ndị a niile ji otu obi na -etinye onwe ha n'ekpere
11 sị: "Ndị ikom Galili, gịnị mere unu ji guzoro na-ele anya n'eluigwe? Jizọs a, onye e si n'ebe ị nọ rịgoro n'eluigwe, ga-abịa n'otu ụzọ ahụ ị hụrụ ka ọ na-aga eluigwe. " 12 Ha we si n'ugwu anākpọ Olivet, nke di Jerusalem nso, ije otù ubọchi -izu -ike gaghachi na Jerusalem. 13 Na mgbe ha banyere, ha rigoro n'elu -ulo, ebe ha n stayingbi, Pita na Jọn na Jemes na Andru, Filip na Tọmọs, Batọlọmiu na Matiu, Jemes nwa Alfiọs na Saịmọn onye na -anụ ọkụ n'obi na Judas nwa Jemes. 14 Ndị a niile ji otu obi na -etinye onwe ha n'ekpere, tinyere ụmụ nwanyị na Meri nne Jizọs, na ụmụnne ya ndị nwoke.
Ọrụ 2: 1-4 (NIV) Ha niile juputara na Mmụọ Nsọ
1 Mgbe ụbọchị Pentikọst bịarutere, ha niile gbakọtara n'otu ebe. 2 Na mberede, ụda sitere n'eluigwe dara dịka oke ifufe na -efesi ike, o wee jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. 3 Ewe me ka ha hu ire di iche iche dika ire ọku, o we dakwasi onye ọ bula nime ha. 4 Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka Mmụọ Nsọ nyere ha ike ikwu.
Ọlụ Ndị Ozi 2: 16-18 (ESV), M ga-awụkwasị mmụọ m n'ahụ anụ ahụ niile
16 Ma nka bu ihe ekwuru site n’aka Joel onye amuma:
17 "'Chineke ga -ekwukwa n'ụbọchị ikpeazụ, sị,
na m ga -awụkwasị mmụọ m n’anụ ahụ niile,
umu -unu ndikom na umu -unu ndinyom g shallbu kwa amuma;
Umu-okorọbia-unu gāhu ọhù;
ndi-okenye-unu g shallrọ kwa nrọ;
18 ọbuná n'isi umu-okorọbiam, na inyom
N'ụbọchị ndị ahụ, m ga -awụpụ mmụọ m, ha ga -ebukwa amụma.
Ọrụ Ndịozi 2: 42-43, Ha raara onwe ha nye nkuzi ndị ozi na mkpakọrịta, na ekpere
42 Ha we nānọgidesi ike n'ozizi ndi -ozi na nnwekọ, n'inyawa -achicha -ha na ekpere -ha. 43 Egwu wee jide mkpụrụ obi ọ bụla, e mekwara ọtụtụ ihe ebube na ihe iriba ama site n'aka ndị ozi.
Ọrụ 4: 23-31 (NIV), W.ha kpere ekpere, ebe ahụ mara jijiji
23 Mgbe a tọhapụrụ ha, ha gakwuuru ndị enyi ha ma kọọrọ ha ihe ndị isi nchụàjà na ndị okenye gwara ha. 24 Na mgbe ha nụrụ ya, ha weliri olu ha elu nye Chineke wee sị, “Ọkaakaa Onyenwe anyị, onye kere eluigwe na ụwa na oké osimiri na ihe niile dị n'ime ha, 25 Onye si n'ọnu Devid nna-ayi, bú orù-Gi, siri Mọ Nsọ,
"'Gịnị mere ndị mba ọzọ ji na-ewe iwe,
Ndi nile di iche iche ab͕a-kwa-ra ihe-efu?
26 Ndi-eze uwa guzoro onwe-ha,
ndi-isi we chikọta onwe-ha,
megide Onye-nwe na megide Onye E tere Ya-
27 n'ihi na, n'ezie, n'obodo a ka ezukọtara megide ohu-Gi di nsọ, bú Jisus, onye I tere manu, bú Herod na Pọntiọs Palet, na ndi mba ọzọ na ndi Israel, 28 ime ihe ọ bụla aka gị na atụmatụ gị buru ụzọ mee. 29 Ugbu a kwa, Onye -nwe, leba egwu ha anya wee nye ndị odibo gị ka ha gaa n'ihu na -ekwu okwu gị n'atụghị egwu ọ bụla, 30 mgbe ị na -esetị aka gị iji gwọọ ọrịa, a na -emekwa ihe ịrịba ama na ihe ebube site n'aha ohu gị dị nsọ Jizọs. " 31 Mb whene ha kpesiri ekpere, ebe ebe ha zukọrọ mara jijiji, ha nile we juputa na Mọ Nsọ, we were nkwuwa -okwu n speakkwu okwu Chineke..
Ọlụ Ndị Ozi 6: 4-6 (Mb) Ma anyị ga-arara onwe anyị nye ekpere na ije ozi nke okwu ahụ
4 Ma anyị ga -arara onwe anyị nye ekpere na ije ozi nke okwu ahụ. " 5 Ihe ha kwuru masịrị nzukọ ahụ dum, ha wee họrọ Stivin, nwoke jupụtara okwukwe na mmụọ nsọ, na Filip, na Prokọrọs, na Nikanọ, na Timọn, na Parmenas, na Nikolaọs, onye na -eso ụzọ ndị Juu nke Antiọk. 6 Ha debere ihe ndị a n'ihu ndịozi, ha kpere ekpere wee bikwasị ha aka n’isi.
Ọrụ 8: 14-18 (ESV), Prared maka ha ka ha wee nata Mmụọ Nsọ
14 Mgbe ndị ozi nọ na Jerusalem nụrụ na Sameria anabatala okwu Chineke, ha zigaara ha Pita na Jọn, 15 onye gbadara na kpere ha ekpere ka ha nata Mmụọ Nsọ, 16 n'ihi na ọ gbabeghị onye ọbụla n'ime ha, mana e mere ha baptism nanị n'aha nke Onye -nwe Jisus. 17 Mgbe ahụ ha bikwasịrị ha aka n'isi, ha wee nata Mmụọ Nsọ. 18 Ma mb Simone Saimon huru na esitere n'isi bikwasi ndi -mọ -ozi Mọ Nsọ, O nyere ha ego,
Ọlụ Ndịozi 9: 36-43 (NIV), Pita gburu ikpere n'ala kpee ekpere; ọ si, Tabita, bilie.
36 Ugbu a, na Jọpa, e nwere otu onye na -eso ụzọ aha ya bụ Tabita, nke pụtara, nke pụtara Dọkas. O jupụtara n'ọrụ ọma na ọrụ ebere. 37 N'ụbọchị ndị ahụ ọ dara ọrịa wee nwụọ, mgbe ha sachara ya, ha tọgbọrọ ya n'ime ụlọ elu. 38 Ebe Lida dị nso na Jọpa, ndị na -eso ụzọ ya nụrụ na Pita nọ ebe ahụ, zigara ya mmadụ abụọ, na -arịọ ya, “Biko bịakwute anyị ngwa ngwa.” 39 Ya mere Pita biliri soro ha gawa. Mgbe o rutere, ha kpụgara ya n'ọnụ ụlọ dị n'elu. Ndị inyom di ha nwụrụ niile guzoro n'akụkụ ya na -akwa akwa ma na -egosi uwe elu na akwa ndị ọzọ Dọkas mere mgbe ya na ha nọ. 40 Ma Pita chụpụrụ ha niile n'èzí, gbuo ikpere n'ala kpee ekpere; o we chigharia n'aru ahu, si, Tabita, bilie. O wee meghee anya ya, mgbe ọ hụrụ Pita, o biliri. 41 O wee nye ya aka ya ma welie ya elu. Mgbe ahụ, ọ kpọrọ ndị nsọ na ndị inyom di ha nwụrụ, o wee chee ya n'ihu ha. 42 Ewe mara ya na Jọpa dum; ọtutu madu we kwere n'Onye -nwe -ayi. 43 O we nọ na Jọpa ọtutu ubọchi n'ebe Saimon, onye nnerji akpukpọ anu.
Ọlụ Ndị Ozi 10: 1-2 (NIV), nwoke nke na-anụ ọkụ n'obi nke na-ekpeku Chineke ekpere mgbe niile
1 Na Sesaria, e nwere otu nwoke aha ya bụ Kọniliọs, onyeisi ndị ọchịagha nke ihe a maara dị ka ndị agha Ịtali, 2 nwoke na -atụ egwu Chineke, ya na ezinụlọ ya niile na -atụ egwu Chineke, na -enye ndị mmadụ onyinye afọ ofufo, na -ekpekwa ekpere mgbe niile nye Chineke.
Ọrụ 10: 9-19 (NIV) Pita rịgooro n'elu ụlọ n'ihe dị ka awa nke isii ikpe ekpere
9 N'echi ya, ka ha nọ n'ụzọ ha na -abịaru obodo ahụ nso. Pita rịgooro n'elu ụlọ n'ihe dị ka awa nke isii ikpe ekpere. 10 Agụụ wee na -agụ ya, ọ chọkwara ihe ọ ga -eri 11 wee hụ ka eluigwe meghere, ihe dị ka nnukwu ibé na -agbadata, ka e si na nkuku anọ ya na -agbada ya n'elu ụwa. 12 N'ime ya ụdị anụmanụ dị iche iche na ihe na -akpụ akpụ na anụ ufe nke ikuku dị n'ime ya. 13 Olu wee bịakwute ya: “Bilie, Pita; gbuo ma rie. ” 14 Ma Pita sịrị, “Mba, Onyenwe m; n'ihi na ọ dịbeghị mgbe m riri ihe ọ bụla rụrụ arụ ma ọ bụ ihe na -adịghị ọcha. ” 15 Olu ahụ wee bịakwute ya nke ugboro abụọ, “Ihe Chineke mere ka ọ dị ọcha, akpọla ihe rụrụ arụ.” 16 Ihe a mere ugboro atọ, e wee buru ihe ahụ laa eluigwe ozugbo.
17 Ma ka Pita nọ n'ime obi mgbagwoju anya banyere ihe ọhụụ ahụ ọ hụrụ nwere ike ịpụta, lee, ndị ahụ Kọniliọs zipụrụ, ka ha jụọ ajụjụ maka ụlọ Saịmọn, guzoro n'ọnụ ụzọ ámá. 18 o wee kpọọ ka a jụọ ma Saịmọn onye a na -akpọ Pita ọ̀ na -anọ ebe ahụ. 19 Ma ka Pita nọ na -atụgharị uche n'ọhụụ a, mmụọ nsọ sịrị ya, “Lee, mmadụ atọ na -achọ gị.
Ọrụ 10: 30-33 (NIV) Anọ m na -ekpe ekpere n'ụlọ m n'awa nke itoolu
30 Kọniliọs wee sị, “Ụbọchị anọ gara aga, ihe dị ka awa nke a. Anọ m na -ekpe ekpere n'ụlọ m n'awa nke itoolu, ma, lee, otu nwoke nke yi uwe na -enwu gbaa guzoro n'ihu m 31 o we si, Kọniliọs, a nuwo ekpere -gi, echeta kwa ebere -gi nile n'iru Chineke. 32 Ya mere ziga na Jọpa, jụọ Simon nke a na -akpọ Pita. Ọ na -anọ n'ụlọ Saịmọn, onye na -esiji akpụkpọ anụ, n'akụkụ oké osimiri. ' 33 N'ihi ya, ezitere m gị ozugbo, ma ị nwere obiọma ịbịa. Ugbu a, anyị niile nọ n'ihu Chineke ịnụ ihe niile Onyenwe anyị nyere gị n'iwu. ”
Ọlụ Ndị Ozi 14:23 (Mb) site n'ekpere na ibu ọnụ, ha nyefere ha n'aka Onyenwe anyị
23 Mgbe ha họpụtakwara ha ndị okenye nzụkọ niile, ha jiri ekpere na ibu ọnụ nyefee ha n'aka Onyenwe anyị onye ha kwere na ya.
Ọrụ 28: 8-9 (NIV) Pọl letara ya wee kpee ekpere, bikwasị ya aka n'isi
8 O wee ruo na nna Pọbliọs dina ọrịa ọkụ na ọnyụnyụ ọbara. Na Pọl letara ya wee kpee ekpere, bikwasị ya aka n'isi wee gwọọ ya. 9 Ma mgbe nke a mere, ndị ọzọ nọ n'agwaetiti ahụ, ndị nwere ọrịa, bịakwara gwọọ ha.
Mgbe Jizọs kpechara ekpere n’otu ebe, otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya, “Onyenwe anyị, kuziere anyị ikpe ekpere, dị ka Jọn kụziiri ndị na-eso ụzọ ya.” ( Luk 11:1 ) Nzaghachi Jizọs dịgasị iche n’ihe odide Grik dị iche iche dị ka ihe odide ndị e mesịrị nwara ime ka ntụziaka Jisọs kwekọọ na Luk 11:1-4 na ekpere Onyenwe anyị na Matiu 6:9-13 . Luk na-enye ntụziaka ndị dị nkenke na nke dị nkenke na nke nwere mmasị karịsịa. N'okpuru ebe a bụ nkọwapụta nke isi ihe ise nke otú Jizọs si nye ntụziaka ikpe ekpere. E nwere ihe odide di na nwunye na-agụ, maka Luk 11:2, “Ka Mmụọ Nsọ Gị bịakwasị anyị, meekwa ka anyị dị ọcha” na Luk 11:2 (Lee 2B n’okpuru)
Luk 11: 2-4 (ahaziri ya dịka ndepụta)
Mgbe ị na -ekpe ekpere, sị:
Nna, doo aha gị nsọ
2B. Mmụọ Nsọ gị bịakwasịrị anyị wee mee ka anyị dị ọcha (ọgụgụ dị iche)
5. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa
Jizọs kwupụtara echiche na Chineke na -aza anyị ọ bụghị naanị n'ihi na anyị bụ enyi kama n'ihi na anyị dị njikere ikwu okwu ike na enweghị mgbochi n'ịjụ ya maka mkpa anyị. (Luk 11: 5-8) Jizọs sịrị, “Rịọnụ, a ga-enye unu; chọnu, unu gāchọta kwa; kụọ aka, a ga -emeghere gị. N'ihi na onye ọ bụla nke na -arịọ na -enweta, onye na -achọkwa na -achọta, onye na -akụkwa ka a ga -emeghe. ” (Luk 11: 9-10) Nna anyị agaghị enye anyị ihe ọjọọ maka ịrịọ maka ihe ọma. (Luk 11: 11-12) Ọ bụrụ na ndị ajọ mmadụ na-enye ụmụ ha ezi onyinye, Nna nke eluigwe ga-enyekwa ndị na-arịọ ya mmụọ nsọ! (Luk 11:13) Rịba ama njikọ dị n'ịrịọ maka Mmụọ Nsọ na Luk 11:13 na ntuziaka Jizọs maka ikpe ekpere, “Mmụọ nsọ gị bịakwasịrị anyị mee ka anyị dị ọcha” (ọgụgụ dị iche nke Luk 11: 2). N'ekpere, anyị ga -achọ ịbụ ndị jupụtara na Mmụọ Nsọ dịka Jizọs mere.
N'okpuru ebe a bụ nkọwa zuru oke nke isi ihe ise Jizọs nyere maka ekpere dịka Luk 11: 2-4 si dị na ngalaba dị n'elu.
Luk 11: 1-4 (Mb) Mgbe ị na-ekpe ekpere, kwue
1 Ugbu a, Jizọs nọ na -ekpe ekpere n'otu ebe, mgbe ọ gwụchara, otu n'ime ndị na -eso ụzọ ya sịrị ya, "Onyenwe anyị, kụziere anyị ikpe ekpere, dịka Jọn kụziiri ndị na -eso ụzọ ya." 2 O wee sị ha, “Mgbe unu na -ekpe ekpere, sịnụ:
"Nna, doo aha gị nsọ.
Ka alaeze gị bịa. (ọgụgụ dị iche: Mmụọ Nsọ bịakwasịrị m wee mee ka m dị ọcha.)
3 Nye anyị nri kwa ụbọchị,
Ewebà -kwa -la ayi nime ọnwunwa. "
Luke 11: 5-13 (ESV), lee ka Nna nke eluigwe ga-esi nye ndị na-arịọ ya mmụọ nsọ!
5 O wee sị ha, “Whichnye n'ime unu nwere enyi ga -agakwuru ya n'etiti abalị wee sị ya, 'Enyi m, gbazinye m ogbe achịcha atọ, 6 n'ihi na enyi m nwoke abịawo njem, ọ dịghịkwa ihe m ga-edebe ya '; 7 ọ ga-esikwa n’ime ụlọ zaa, sị, ‘Egbula m; ibo ụzọ emechiela, mụ na ụmụ m dina n'ihe ndina. Apụghị m ibili nye gị ihe ọ bụla '? 8 Asim unu, Ọ bu ezie na ọ gaghi -ebili inye ya ihe ọ bula n'ihi na ọ bu eyì -ya, ma n'ihi ekweghi -ekwe -ya ọ g risebili nye ya ihe ọ bula ọ nāchọ. 9 Mu onwem si kwa unu, riọ, ag willnye kwa unu; chọnu, unu gāchọta kwa; kụọ aka, a ga -emeghere gị. 10 N'ihi na onye ọ bụla nke na -arịọ na -anata, onye na -achọ na -achọta, onye na -akụ aka ka a ga -emeghere. 11 Kedu nna n'etiti unu, ma ọ bụrụ na nwa ya nwoke rịọ ya azụ, nke ga -enye ya agwọ kama inye ya azụ; 12 ma-ọbu asi na ọ gāriọrọ ya àkwá, g ,nye ya akpi? 13 Ya mere, ọ bụrụ na unu, ndị bụ ajọ mmadụ, maara ka esi enye ụmụ unu ezi onyinye, lee ka Nna nke eluigwe ga -esi nye ndị na -arịọ ya Mmụọ Nsọ! "
(Matiu 6: 9-13) Kpee ekpere otu a
9 Kpee ekpere dịka nke a:
“Nna anyị nke bi n'eluigwe,
nsọ ka aha gị dịrị.
10 Ka alaeze gị bịa,
Ka uche gị mee,
n’elu ụwa dị ka ọ dị n’eluigwe.
11 Nye anyị nri taa,
12 gbaghara anyị ụgwọ anyị ji,
dika ayi onwe -ayi b haveagharawo -kwa -ra ndi ji ayi ugwọ.
13 Ewebà -kwa -la ayi nime ọnwunwa,
Kama napụta anyị n'ihe ọjọ.
Anyị kwesịrị ikpegara otu Chineke na Nna ekpere anyị. Nzọụkwụ mbụ nke usoro a bụ iweda onwe gị ala n'ihu Chineke na ikwupụta ịdị ukwuu ya. Anyị na-abịakwute ya na nsọpụrụ na nkwanye ùgwù na-eweda onwe anyị ala n'ihu ya. Anyị na-ekwupụta ịdị nsọ na ịdị ebube ya. Anyị na-ekwusi ike na ọ karịrị anyị ike na amamihe. Anyị na-abanye n'ekpere site na ofufe.
Ka Chineke nụ ekpere anyị, anyị chọrọ ịnọ n'ihu Chineke. Ya mere, anyị na-abata n'ekpere na-achọ ọnụnọ nke Chineke. Ọ dị mma ịbịaru Chineke nso. ( Ọma 73:28 ) Mgbe anyị na-abịaru Chineke nso, Chineke na-abịaru anyị nso. (Jems 4:8) Ụzọ bụ́ isi anyị si abịaru nso bụ ime ka obi anyị dị ọcha na iweda onwe anyị ala. ( Jems 4:9 ). Anyị na-efekwa ofufe ikwusa otuto ya dị ka ọgbakọ dị n’eluigwe ehihie na abalị niile na-akwụsị ikwu, sị, â€œNsọ, nsọ, nsọ, bụ Onye -nwe Chineke pụrụ ime ihe nile, onye dịbu, dịkwa adị na ọ ga-abịa!” (Mkpu. 4:7-8) Anyị na-atụpụ okpueze anyị n’ihu ocheeze ahụ na-asị: “I kwesịrị ekwesị, Onyenwe anyị na Chineke anyị, ịnara otuto na nsọpụrụ na ike, n’ihi na ọ bụ gị kere ihe niile, ọ bụkwa uche gị ka ha ji dịrị, keekwa ha. ” (Mkpu. 4:10-11)
E wezụga okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị Chineke ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla nke ga-abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na-akwụghachi ndị na-achọ ya ụgwọ ọrụ. (Hib 11:6) Okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na-atụ anya ya, nkwenye nke ihe a na-ahụghị anya. (Hib 11:1) N'ịbịakwute Chineke n'okwukwe, na nkwenye zuru oke anyị na -akwado eziokwu nke Chineke dịka eziokwu bụ isi nke na -eduzi eziokwu anyị. Anyị kwesịrị ịbịaru nso na ezi obi na nkwenye zuru oke nke okwukwe, na -efesa obi anyị ka ọ dị ọcha pụọ ​​n'akọ na uche ọjọọ wee were mmiri dị ọcha sachaa ahụ anyị. (Ndị Hibru 10:22) Echiche anyị kwesịrị ịbụ na ọ bụghị ihe siri ike ma ọlị nye Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, Nna anyị nke Eluigwe, idozi nsogbu ọ bụla anyị nwere ike iche ihu.
Abụ Ọma 73: 27-28 (ESV), Ọ dị mma ịnọ Chineke nso
27 N'ihi na lee, ndị nọ gị anya ga -ala n'iyi;
ị na -ebibi onye ọ bụla na -ekwesịghị ntụkwasị obi nye gị.
28 Mana maka m ọ dị mma ịnọ Chineke nso;
Emewom Onye -nwe -ayi Jehova ebe -nb refugeabàm,
ka m wee kọọ akụkọ ọrụ gị niile.
Jemes 4: 8-10, Bịaruonụ Chineke nso, ọ ga-abịarukwa unu nso
8 Bịaruonụ Chineke nso, ọ ga -abịarukwa unu nso. Meenụ ka aka unu dị ọcha, unu ndị mmehie, meekwanụ ka obi unu dị ọcha, unu ndị nwere uche abụọ. 9 Nwee nwute na iru uju ma kwaa akwa. Ka ọchichọ -unu ghọ iru -újú, ka ọ joyù -unu ghọ kwa ọchichiri. 10 Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga -ebulikwa gị elu.
Mkpughe 4: 8 (NW), Nsọ, nsọ, nsọ, bụ Onye -nwe Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, onye dịrị adị na onye dị ugbu a.
Nsọ, nsọ, nsọ, bụ Onye -nwe Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, onye dịrị na onye dị ugbu a na -abịa!"
NKPUGHE 4:11 I kwesiri, Onye -nwe -ayi na Chineke, ka I nata otuto na nsọpuru na ike
11 "I kwesiri, Onye -nwe -ayi na Chineke -ayi,
inara otuto na nsọpụrụ na ike,
n'ihi na ọ bụ gị kere ihe niile,
ọ bụkwa site n'ọchịchọ gị ka ha ji dịrị, wee kee ha. "
(Ndị Hibru 11: 6) Enweghị okwukwe ọ gaghị ekwe omume ime ihe na -atọ ya ụtọ
6 na ma okwukwe adịghị ọ gaghị ekwe omume ime ihe na -atọ ya ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla ga -abịaru Chineke nso ga -ekwenye na ọ dị adị na ọ na -akwụghachikwa ndị na -achọ ya ụgwọ.
Ndị Hibru 11:1 okwukwe bụ nkwenye nke ihe a na -ahụghị
1 ugbu a okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe a na -ele anya ya, nkwenye nke ihe a na -ahụghị.
Ndị Hibru 10: 22-23 (ESV), ka anyị jiri ezi obi bịaruo nso na nkwenye siri ike nke okwukwe
22 ka anyị were ezi obi bịaruo nso na nkwenye siri ike nke okwukwe. 23 Ka anyị jidesie nkwupụta nke olile anya anyị ike n'amaghị jijiji, n'ihi na onye kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi.
—Abụ Ọma 43: 3-5. Aga m aga ebe ịchụàjà Chineke
3 Zipụ ìhè gị na eziokwu gị;
ka ha na -edu m;
ka ha kpọta m n'ugwu nsọ gị
na ụlọ gị!
4 mgbe ahụ Aga m aga ebe ịchụàjà Chineke,
nye Chineke ọ joyụ nke ukwuu,
M'g willwere kwa ubọ -akwara kele gi,
5 Gini mere i ji ruda n'ala, nkpuru -obim?
gịnịkwa mere i ji na -agba aghara n'ime m?
Nwee olile -anya na Chineke; n'ihi na m'g praisekele kwa ya ọzọ,
nzọpụta m na Chineke m.
Abụ Ọma 69: 30-33, Unu ndị na -achọ Chineke, ka obi unu tụte
30 M'g aji abù to aha Chineke;
M ga -eji ekele too ya.
31 Nke a ga -atọ Jehova ụtọ karịa oke ehi
ma ọ bụ oke ehi nwere mpi na ụkwụ ụkwụ.
32 Mgbe ndị dị umeala n'obi hụrụ ya, ha ga -a gladụrị ọ ;ụ;
unu ndi nāchọ Chineke, ka obi -unu di ndu.
33 N'ihi na Jehova na -anụ ndị ogbenye
ọ dịghịkwa eleda ndị mkpọrọ anya.
“Ka alaeze gị bịa” bụ ekpere ibute ebumnuche Chineke ụzọ karịa nke gị. Ọ bụ ka uche Chineke mezuo na ndụ gị na n'elu ụwa. Anyị kwesịrị ibu ụzọ gbanwee, ma kwado uche Chineke na nke anyị. Anyị na -ekwupụta okwu Chineke n'ekpere anyị ka o kwekọọ n'uche ya - ijidesi nkwa ya ike. Anyị na -arịọ Chineke ka o zitere anyị ìhè ya na eziokwu ya ka ha nwee ike idu anyị. (Abụ Ọma 43: 3)
N'oké mkpagbu, Jizọs kpere ekpere, sị, Nna, ọ bụrụ na ị chọrọ, wepụ iko a n'ebe m nọ. Ka o sina dị, ka uche gị mee, ọ bụghị nke m. ” (Luk 22:42) Ọ bụrụ na Chineke dị njikere, Jizọs chọrọ ka e wepụ iko ahụhụ ọ na -aga ịfefe, n'agbanyeghị nke ahụ, o rubere isi ruo ọnwụ, ọbụna n'obe. (Ndị Filipaị 2: 8) N'ihi nke a, Chineke buliri ya elu wee nye ya aha karịa aha niile ka ire niile wee kwupụta na Jizọs bụ Onyenwe anyị Mesaịa. ' (Ndị Hibru 2: 9) Ọ bụ ezie na ọ bụ nwa nwoke, ọ mụtara nrubeisi site na ahụhụ ọ tara - Ka emekwara ya ka o zuo oke, ọ ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighi ebi nye ndị niile na -erubere ya isi, ebe Chineke họpụtara ya nnukwu onye nchụàjà. (Ndị Hibru 5: 7-5)
Anyị ga-enwe uche nke Kraịst nwere. (Fil 2:1-5) Anyị ga-erubere isi, jiri egwu na ịma jijiji rụọ ọrụ nzọpụta nke onwe anyị (Ndị Filipaị 2:12). Ọ bụ Chineke na-arụ ọrụ n'ime gị, ma ime ihe ma na-arụ ọrụ maka ọdịmma ya. (Fil 2:13) Dị ka ụmụ Chineke ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịghọ ndị na-enweghị ntụpọ na ndị aka ha dị ọcha, ndị na-enweghị mmerụ n'etiti ọgbọ gbagọrọ agbagọ na nke gbagọrọ agbagọ, n'etiti ndị anyị na-enwu dị ka ìhè n'ime ụwa, na-ejidesi okwu nke ndụ ike. ( Ndị Filipaị 2: 14-16 ) Dị ka ụmụ na-erube isi, anyị ekwesịghị ime ka ọchịchọ nke amaghị ihe mbụ anyị nwere. ( 1 Pita 1:14 ) Jizọs sịrị, mgbe o weliri anya ya lee ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Ngọzi na-adịrị unu ndị ogbenye, n’ihi na alaeze Chineke bụ nke unu.” ( Luk 6:20 ) Dị ka ndị ohu Chineke, anyị bụ ndị ohu Chineke. jaa onwe-ayi mma n'uzọ nile: site n'oké ntachi-obi, na nkpab͕u, nkpab͕u, nkpab͕u, nkpab͕u, iti ihe, nkpọrọ, ọgbaghara, ndọb͕u, ehihie na abalị, agu; site n'ịdị ọcha, ihe ọmụma, ndidi, obiọma, Mmụọ Nsọ, ezi ịhụnanya; site n'okwu ezi-okwu, na ike nke Chineke; were ihe-agha nke ezi omume di n'aka-nri na n'aka-ekpe; site na nsọpuru na ihe-ihere, site n'ikwu-ha na otuto. A na-ewere anyị dị ka ndị aghụghọ, ma anyị bụ eziokwu; dika amaghi-ama, ma mara nke-ọma; dika ndi nānwu anwu, ma le, ayi di ndu; dị ka ntaramahụhụ, ma e gburu; dị ka ihe mwute, ma na-aṅụrị ọṅụ mgbe nile; dika ogbenye, ma nēme ka ọtutu ọgaranya; dị ka enweghị ihe ọ bụla, ma nwee ihe niile. ( 2Kọ 6:4-10 ) Dị ka Jizọs kwuru, sị: “Ọ dịghị onye ọ bụla nke na-atụkwasị aka n’ubi ihe ubi ma lee anya azụ nke kwesịrị ekwesị maka alaeze Chineke.”— Luk 9:62 .
Alaeze Chineke dị n'etiti anyị. (Luk 17:21) Ọ naghị abịa n'ụzọ a pụrụ ịhụ anya. (Luk 17:20) Jizọs kwuru, "N'ezie, n'ezie, ana m asị gị, ọ gwụla ma a mụrụ mmadụ ọzọ, ọ pụghị ịhụ alaeze Chineke." (Jọn 3: 3) Ọ sịrị, “Ihe a mụrụ site n'anụ ahụ bụ anụ ahụ, ihe a mụrụ site na mmụọ nsọ bụ mmụọ. Ka ọ ghara iju gi anya na M'siri gi, Aghaghi imu unu ọzọ. Ifufe na -efega ebe ọ chọrọ, ị na -anụkwa ụda ya, ma ị maghị ebe o si bịa na ebe ọ na -eje. Otú ahụ ka ọ dịkwa onye ọ bụla mmụọ nsọ mụrụ. ” (Jọn 3: 6-8) Mgbe a na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ ma ọ bụ na-agwọ ndị ọrịa site n'ike Chineke, Alaeze Chineke abịakwasịla anyị. (Luke 10: 9, Luke 11:20) Obio ubọn̄ Abasi idịghe udia ye edin̄wọn̄ edi edi edinen ido ye emem ye idatesịt ke Edisana Spirit. (Ndị Rom 14:17) Mmụọ Nsọ bụ nkwa nke ihe nketa anyị ruo mgbe anyị nwetara ya. (Efe 1: 13-14) Anyị na-ekpe ekpere ka alaeze Chineke bịa site na ikpe ekpere ka Mmụọ Nsọ bịakwasị anyị. (hụ okpuru)
(Abụ Ọma 43: 3) Zipụ ìhè gị na eziokwu gị; ka ha duru m
3 Zipụ ìhè gị na eziokwu gị; ka ha duru m;
AB 57 ỌMA 5: XNUMX Ka ebube -Gi di n'elu uwa nile
5Buli elu, Chineke, n'elu elu -igwe! Ka ebube gị dịrị n’elu ụwa niile!
(Luk 22:42) Ọ bụghị uche m, kama nke gị
42 na -asị, “Nna, ọ bụrụ na ị chọrọ, wepụ iko a n'ebe m nọ. Ka o sina dị, emeghị nke m, kama nke gị. "
Ndị Filipaị 2: 8-11 (ESV), na-erube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'obe
8 Ebe achọtara ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site na irube isi ruo ọnwụ, ọbụnadị ọnwụ n'obe. 9 Ya mere, Chineke ebuliela ya elu nke ukwuu wee nye ya aha dị elu karịa aha niile, 10 ka ikpere nile we b bowue n'ala n'aha Jisus, n'elu-igwe na n'elu uwa na n'okpuru uwa, 11 na ire nile na -ekwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto.
(Ndị Hibru 5: 7-10) Ọ mụtara nrubeisi site na ahụhụ ọ tara
7 N’ụbọchị anụ ahụ ya, Jizọs ji akwa akwa na anya mmiri were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike nye onye nwere ike ịzọpụta ya n'ọnwụ, a nụkwara ya n'ihi nsọpụrụ ya.. 8 N'agbanyeghị na ọ bụ nwa nwoke, ọ mụtara nrube isi site na ahụhụ ọ tara. 9 Ebe emekwara ka o zuo oke, ọ ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighi ebi nye ndị niile na -erubere ya isi, 10 ebe Chineke hoputara ya onye -isi -nchu -àjà dika usoro Melkizedek si di.
(Ndị Filipaị 2: 1-5) Nwenwe uche a n'etiti onwe -unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs
1 Ya mere, ọ bụrụ na agbamume ọ bụla dị na Kraịst, nkasi obi ọ bụla sitere n'ịhụnanya, itinye aka na mmụọ, mmetụta ọmịiko na ọmịiko ọ bụla, 2 mezue ọ joyụ m site n'inwe otu obi, nwee otu ịhụnanya, n'ịdị n'otu na n'otu uche. 3 Emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye ma ọ bụ mpako, mana jiri ịdị umeala n'obi gụọ ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe gị. 4 Ka onye ọ bụla n'ime unu ghara ilekwasị anya naanị n'ọdịmma nke onwe ya, kamakwa n'ọdịmma nke ndị ọzọ. 5 Nwenwe uche a n'etiti onwe -unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs
(Ndị Filipaị 2: 12-16) N'ihi na ọ bụ Chineke na -arụ ọrụ n'ime gị, ma ị na -achọ ma na -arụ ọrụ maka ihe dị ya ụtọ
12 Ya mere, ndị m hụrụ n'anya, dịka ị na -erube isi oge niile, ugbu a ugbu a, ọ bụghị naanị dị ka ọnụnọ m, mana ọtụtụ ihe karịa mgbe m na -anọghị. jiri egwu na ịma jijiji rụpụta nzọpụta nke onwe unu, 13 n'ihi na ọ bụ Chineke na -arụ ọrụ n'ime unu, ma ị na -achọ ma na -arụ ọrụ maka ihe dị ya ụtọ. 14 Na -eme ihe niile na -enweghị ntamu ma ọ bụ na -ese okwu, 15 ka unu wee bụrụ ndị aka ha dị ọcha na ndị aka ha dị ọcha, ụmụ nke Chineke na -enweghị mmerụ n'etiti ọgbọ gbagọrọ agbagọ na nke gbagọrọ agbagọ, n'etiti ndị unu na -enwu dị ka ọkụ n'ụwa. 16 na -ejidesi okwu nke ndụ ike, ka m wee nwee ike nganga n'ụbọchị nke Kraịst na agbaghị m ọsọ n'efu ma ọ bụ dọgbuo onwe m n'ọrụ n'efu.
1 Pita 1:14 (NIV) unu ekwela ka agụụ ihe ọjọọ nke mbụ unu nwere mee unu
14 Dị ka ụmụ na -erube isi, unu ekwela ka ọchịchọ nke amaghị nke mbụ unu
Luk 6:20 (NLT) Ngọzi na -adịrị unu ndị ogbenye, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke unu
20 na O weliri anya ya lee ndị na -eso ụzọ ya wee sị: "Ngọzi na -adịrị unu ndị ogbenye, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke unu. "
2 Ndị Kọrịnt 6: 4-10 (ESV), dị ka ndị ohu Chineke, anyị na-aja onwe anyị mma n'ụzọ niile
ma dị ka ndị ohu Chineke, anyị na -aja onwe anyị mma n'ụzọ niile: site na ntachi obi dị ukwuu, na mkpagbu, ihe isi ike, ọdachi, 5 iti ihe, ịtụ mkpọrọ, ọgba aghara, ọrụ, ụra abalị, agụụ; 6 site n'ịdị ọcha, ihe ọmụma, ogologo ntachi obi, obiọma, Mmụọ Nsọ, ezi ịhụnanya; 7 site n'okwu nke eziokwu, na ike nke Chineke; na ihe -agha nke ezi omume n'aka -nri na aka -ekpe; 8 site na nsọpụrụ na nlelị, site na nkwutọ na otuto. A na -emeso anyị dị ka ndị aghụghọ, ma anyị bụ eziokwu; 9 dị ka onye a na -amaghị ama, ma amakwa nke ọma; dika ndi nānwu anwu, ma, le, ayi di ndu; dị ka ntaramahụhụ, ma egbughị anyị; 10 dị ka ndị na -eru uju, ma anyị na -aicingụrị ọ alwaysụ mgbe niile; dị ka ndị ogbenye, ma na -eme ka ọtụtụ ndị baa ọgaranya; dika ndi enweghi ihe, ma ha nwere ihe nile.
Luk 9:62: Ọ dịghị onye ọ bụla nke na -etinye aka n'ọ́gụ ma na -ele anya n'azụ kwesịrị maka alaeze Chineke.
62 Jizọs sịrị ya, "Ọ dịghị onye ọ bụla nke na -etinye aka n'ọ́gụ ma na -ele anya n'azụ kwesịrị ekwesị maka alaeze Chineke."
John 3: 3-8 (ESV), Ọ gwụla ma amụrụ mmadụ ọzọ, ọ nweghị ike ịhụ alaeze Chineke
3 Jizọs zara ya, “N'ezie, n'ezie, ana m asị gị, ọ gwụla ma amụrụ mmadụ ọzọ ọ nweghị ike ịhụ alaeze Chineke. " 4 Nikọdimọs sịrị ya, “Olee otu a ga -esi mụọ mmadụ mgbe o mere agadi? Ọ̀ pụrụ ịbanye n'afọ nne ya nke ugboro abụọ ka a mụọ ya? " 5 Jisus zara, si,N'ezie, n'ezie, ana m asị gị, ọ gwụla ma a mụrụ mmadụ site na mmiri na mmụọ nsọ, ọ gaghị aba n'alaeze Chineke. 6 Ihe a mụrụ site n'anụ ahụ bụ anụ ahụ, ihe a mụrụ site na mmụọ nsọ bụ mmụọ. 7 Ka ọ ghara iju gi anya na M'siri gi, Aghaghi imu unu ọzọ. ' 8 Ifufe na -efega ebe ọ chọrọ, ị na -anụkwa ụda ya, ma ị maghị ebe o si bịa na ebe ọ na -eje. Otú ahụ ka ọ dịkwa onye ọ bụla a mụrụ site na Mmụọ Nsọ. "
(Luk 17: 20-21) Ala eze Chineke dị n'etiti gị
20 Ebe ndị Farisii jụrụ ya mgbe alaeze Chineke ga -abịa, ọ zara ha sị,Alaeze Chineke anaghị abịa n'ụzọ a pụrụ ịhụ anya, 21 ha agaghịkwa asị, 'Lee ya!' ma ọ bụ 'N'ebe ahụ!' n'ihi na le, ala -eze Chineke dị n'etiti gị. "
Luk 10: 9-12, gwọọ ndị ọrịa nọ n'ime ya, sị ha, 'Alaeze Chineke abịaruwo unu nso.'
9 Gwọọ ndị ọrịa nọ n'ime ya, sị ha, 'Alaeze Chineke abịaruwo unu nso.' 10 Ma mgbe ọ bụla ị banyere obodo ma ha anabataghị gị, gaa n'okporo ámá ya wee sị, 11 'Ọbụna ájá nke obodo gị nke na-adakwasị ụkwụ anyị ka anyị na-ehichapụ megide gị. Otú ọ di, mara nka, na ala-eze Chineke di nso. 12 M na-agwa gị, ọ ga-adịrị Sọdọm mfe n'ụbọchị ahụ karịa obodo ahụ.
(Luk 11:20) Ọ bụrụ na ọ bụ mkpịsị aka Chineke ka m ji na -achụpụ mmụọ ọjọọ, yabụ na alaeze Chineke abịakwasịwo gị.
ma ọ bụrụ na ọ bụ mkpịsị aka Chineke ka m ji na -achụpụ mmụọ ọjọọ, mgbe ahụ alaeze Chineke abịakwasịwo unu.
Ndị Rom 14:17 (NIV) Alaeze Chineke - ezi omume na udo na ọ joyụ n'ime Mmụọ Nsọ
17 n'ihi na ala eze Chineke abughi ihe oriri na ị drinkingụ ihe ọ butụ butụ kama ọ bụ ezi omume na udo na ọ joyụ n'ime Mmụọ Nsọ.
Ndị Efesọs 1: 11-14 (ESV), ejiri mmụọ nsọ e kwere ná nkwa kaa ya
11 N'ime ya ka anyị nwetara ihe nketa, ebe eburu ụzọ kpebie dịka onye ahụ na -eme ihe niile si dị dịka ọchịchọ nke ọchịchọ ya si dị. 12 ka ayi onwe -ayi, bú ndi buru uzọ olile anya na Kraist, we buru otuto nke ebube -Ya. 13 Na ya ka gị onwe gị kwa, mgbe ị nụrụ okwu nke eziokwu, ozi ọma nke nzọpụta gị, wee kwere na ya ejiri mmụọ nsọ e kwere ná nkwa kaa ya akara, 14 onye bụ nkwa nke ihe nketa anyị ruo mgbe anyị nwetara ya, ka e wee nye ya otuto.
Ndị ezi -omume oge ochie matara na ngọzi nile nke Chineke na -abịa site n'ịga n'ebe nsọ na iguzobe onye na -agbanwe ihe nye Chineke. Anyị kwesịkwara ịchọ ịga ebe nsọ n'ekpere. (Psa 43: 3-4) Ugbu a Kraịst abịala, anyị bụ ụlọ nsọ Chineke site na mmụọ Chineke bi n'ime anyị-ụlọ nsọ Chineke dị nsọ, anyị ga-abụkwa ụlọ nsọ ahụ (1 Cor 3: 16-17) Ahụ anyị bụ ụlọ nsọ. nke Mmụọ Nsọ - anyị abụghị nke anyị. (1 Ndị Kọrịnt 6:19)
N'ekpere anyị na-aga usoro mmetọ nke mmụọ. Anyị na-achọ ka e mee ka anyị dị ọcha na ido ya nsọ site na Mụọ Nsọ (2Te 2:13, 1 Pita 1:2). Site na ikwere na nchegharị anyị na-enweta onyinye nke Mụọ Nsọ. ( Ọrụ 2:38 ) Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, o kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ọ ga-agbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile. (1 Jọn 1:9) Anyị na-achọ iyipụ onwe anyị ochie bụ́ nke bụ́ ụzọ ndụ mbụ anyị, bụrụkwa nke a na-emerụ emerụ site n’ọchịchọ aghụghọ, na ka e mee ka anyị dị ọhụrụ na mmụọ nke uche anyị iyiri onwe anyị ọhụrụ, nke e kere n’oyiyi ahụ. nke Chineke n'ezi omume na idi-nsọ. ( Efe 4:22-24 ) A na-eme ka mmadụ ọhụrụ ahụ dị ọhụrụ n’ihe ọmụma dị ka onyinyo nke onye kere ya si dị. (Kọl 3:10) Chineke na-azọpụta anyị site n’ịsacha nke mmụgharị na ime ka mmụọ nsọ dị ọhụrụ nke ọ na-awụsa anyị n’ụba site n’aka Jizọs Kraịst. (Tit 3:5-6)
Dị ka ụmụ na-erube isi, unu ekwela ka o kwe omume agụụ nke amaghị ihe unu na mbụ: kama dị ka Onye kpọworo unu dị nsọ, unu na-achụsokwa ịdị nsọ, dị ka e dere, sị, ‘Unu ga-adị nsọ, n’ihi na m dị nsọ. (1 Pita 1:14-16) Ekpere onye ezi omume nwere ike dị ukwuu ka ọ na-arụ ọrụ. (Jemes 5:16) Ịchọ ezi omume na-enye anyị nlebara anya na ihu ọma Chineke (1 Pita 3:12). A ga-eme anyị baptizim (mikpu) site n'ọkụ na-eme ka ọ dị ọcha nke Mmụọ Nsọ. (Luk 3:16) Ahụ anyị bụ ụlọ nsọ nke Mmụọ Nsọ nke anyị na-anata n’aka Chineke—anyị abụghị nke anyị. (1 Ndị Kọrint 6:19-20) Ebe anyị nwere obi ike ịbanye n’ebe nsọ site n’ọbara Jizọs, site n’ụzọ ọhụrụ na nke dị ndụ nke o meghere nye anyị, ka anyị jiri ezi obi bịaruo nso na mmesi obi ike nke okwukwe, Ewesara obi-ayi ọcha site n'ajọ akọ-na-uche, were kwa miri di ọcha sa aru-ayi. (Hib 10:19-22) Anyị aghaghị ịgbalịsi ike maka ịdị nsọ nke na-enweghị onye ga-ahụ Onyenwe anyị. (Hib 12:14)
—Abụ Ọma 43: 3-4. Aga m aga ebe ịchụàjà Chineke
ka ha duru m;
1 Ndị Kọrịnt 3: 16-17. Ị bụ ụlọ nsọ nke Chineke na mmụọ nke Chineke bi n'ime gị
16 Ị maghị nke ahụ ị bụ ụlọ nsọ Chineke na mmụọ nke Chineke bi n'ime gị? 17 Ọ bụrụ na onye ọ bụla emebi ụlọ nsọ Chineke, Chineke ga -ebibi ya. Maka Ụlọ nsọ Chineke dị nsọ, gị onwe gị bụkwa ụlọ nsọ ahụ.
1 Ndị Kọrịnt 6: 19-20 (ESV), ahụ anyị bụ ụlọ nsọ nke mmụọ nsọ dị n'ime gị
19 Ma -ọbu ùnu amataghi na aru -unu bu ulo nsọ nke Mọ Nsọ, nke di nime unu, onye unu nwere site na Chineke? Ị bụghị nke gị, 20 n'ihi na ejiri ọnu -ahia b boughtara unu. Ya mere nye Chineke otuto n'ahụ gị.
2 Ndị Tesalonaịka 2: 13 A zọpụtara, site na ido nsọ site na Mmụọ na ikwere n'eziokwu
13 Ma anyị kwesịrị inye Chineke ekele mgbe niile maka unu, ụmụnna m ndị Onyenwe anyị hụrụ n'anya, n'ihi na Chineke họọrọ unu ka unu bụrụ mkpụrụ mbụ. ka a zọpụta, site na ido nsọ site na Mmụọ Nsọ na ikwere n'eziokwu.
(1 Pita 1: 2) In ido nsọ nke Mmụọ Nsọ
2 dị ka ịmara Chineke nke Nna, n’ido nsọ nke Mmụọ Nsọ, maka nrube isi nye Jizọs Kraịst na maka fesa ọbara ya:
Ọrụ Ndịozi 2:38 (NIV) Chegharịa ma mee baptism - maka mgbaghara mmehie gị
38 Ma Pita sịrị ha,Chegharịanụ ka e meekwa onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie unu, unu ga -anatakwa onyinye nke Mmụọ Nsọ..
1 Jọn 1: 9, Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na ịsachapụ anyị
9 Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na ịsachapụ anyị ajọ omume niile.
Ndị Efesọs 4: 22-24 (ESV), Ptinye na mmadụ ọhụrụ - n'ezi omume na ịdị nsọ
22 na yipụ mmadụ ochie gị, nke bụ ụdị ndụ unu gara aga, nke rụrụ arụ site n'ọchịchọ aghụghọ, 23 ka eme kwa ka unu di ọhu na mọ nke uche -unu, 24 na iyikwasịkwa mmadụ ọhụrụ ahụ, nke e kere nʼọdịdị nke Chineke n’ezi omume na ịdị nsọ.
Ndị Kọlọsi 3: 9-10 Ọhụrụ ahụ, nke a na -emegharị ọhụrụ ka onyonyo onye kere ya si dị
9 Unu agharala ibe unu ụgha, ebe unu wepụrụ mmadụ ochie ahụ na omume ya 10 na yikwasịkwara mmadụ ọhụrụ ahụ, nke a na -eme ka ọ dị ọhụrụ na ihe ọmụma mgbe oyiyi onye kere ya
1 Ndị Kọrịnt 12:13 (ESV), Mị toụ otu Mmụọ
13 N'ihi na n'ime otu mmụọ ka e mere anyị niile baptizim n'otu ahụ - ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ndị ohu ma ọ bụ ndị nweere onwe haewe me ka ha nile ofua site n'otù Mọ Nsọ.
(Ndị Efesọs 5:18) Unu a getụkwala mmanya, kama jupụta na mmụọ nsọ
18 Unu a getụkwala mmanya, n'ihi na nke ahụ bụ ịkwa iko, kama jupụta na mmụọ nsọ
Taịtọs 3: 4-7 (NIV), Tọ na -asachapụ mmụba na mmelite nke Mmụọ Nsọ
4 Mana mgbe ịdị mma na obiọma Chineke Onye nzọpụta anyị pụtara, 5 ọ zọpụtara anyị, ọ bụghị n'ihi ọrụ anyị mere n'ezi omume, kama dịka ebere ya si dị, site n'ịsacha mmụpụta ọhụrụ na mmelite nke Mmụọ Nsọ, 6 Onye Ọ wụkwasịrị anyị n'ụba site n'aka Jizọs Kraịst Onye Nzọpụta anyị, 7 ka ewe gua ayi n'onye ezi omume site n'amara -Ya ayi we ghọ ndi -nketa dika olile -anya nke ndu ebighi -ebi si di.
Ndị Rom 5:5 (NIV) A wụsawo ịhụnanya Chineke n’ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ
5 olileanya adịghịkwa eme ka ihere mee anyị, n'ihi na A wụsawo ịhụnanya Chineke n’ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ nke enyere anyị.
1 Pita 1: 14-16, Bdị nnọọ ka onye kpọrọ unu dị nsọ, unu ga -adịkwa nsọ n'omume unu niile
14 Dị ka ụmụ na -erube isi, unu ekwela ka ọchịchọ nke amaghị nke mbụ unu, 15 ma dika onye ahụ kpọrọ unu dị nsọ, unu onwe unu ga -adịkwa nsọ n'omume unu niile, 16 n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Unu gādi nsọ, n'ihi na nsọ ka Mu onwem di. "
Jemes 5: 15-16 (NIV), Tekpere okwukwe ga -azọpụta onye na -arịa ọrịa
15 Ekpere nke okwukwe ga -azọpụtakwa onye na -arịa ọrịa, na Onyenwe anyị ga -akpọlite ​​ya. Ọ bụrụkwa na o mere mmehie, a ga -agbaghara ya. 16 Ya mere, kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu na na -ekpekwaranụ ibe unu ekpere, ka a gwọọ unu. Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu ka ọ na -arụ ọrụ.
1 Pita 3:12 (NIV), TAnya abua nke Jehova di n'aru ndi ezi omume, nti -Ya ghe -kwa -ra oghe n'ekpere -ha
12 n'ihi na Anya Jehova di n'aru ndi ezi omume, Nti -Ya abua ghe -kwa -ra oghe n'ekpere -ha. Ma ihu Onyenwe anyị na -emegide ndị na -eme ihe ọjọọ. ”
Luk 3:16 (NLT) Ọ ga -eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu baptizim
16 Jọn zara ha niile, sị, “Eji m mmiri mee unu baptizim, mana onye ahụ dị ike karịa m na -abịa, eriri akpụkpọ ụkwụ onye m na -erughị eru ịtọpụ ya. Ọ ga -eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu baptizim.
1 Ndị Kọrịnt 6: 19-20ahụ anyị bụ ụlọ nsọ nke Mmụọ Nsọ n'ime gị
19 Ma ọ bụ ị maghị na ahụ gị bụ ụlọ nsọ nke Mmụọ Nsọ nọ n'ime gị, onye ị nwere site na Chineke? Ị bụghị nke gị, 20 n'ihi na ejiri ọnu -ahia b boughtara unu. Ya mere nye Chineke otuto n'ahụ gị.
Ndị Hibru 10: 19-23 (ESV), Our obi fesa dị ọcha ma jiri mmiri dị ọcha sachaa ahụ anyị
19 Ya mere, ụmụnna m, ebe ọ bụ na anyị nwere obi ike ị banye ebe nsọ site n'ọbara Jizọs, 20 site na uzo ohuru na ndu nke o mepere anyị site na ákwà mgbochi, ya bụ, site n'anụ ahụ ya, 21 ebe ayi nwere onye -isi -nchu -àjà n'ulo Chineke, 22 ka anyị were ezi obi bịaruo nso na nkwenye siri ike nke okwukwe, jiri obi anyị fesa site na akọ na uche ọjọọ wee jiri mmiri dị ọcha sachaa ahụ anyị. 23 Ka anyị jidesie nkwupụta nke olile anya anyị ike n'amaghị jijiji, n'ihi na onye kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi.
NDI -HIBRU 12:14 Gbalịsie ike maka ịdị nsọ nke ọ na -adịghị onye ọ bụla ga -ahụ Onyenwe anyị
14 Gbalịsie ike ka gị na mmadụ niile dịrị n'udo, yana maka ịdị nsọ nke na -enweghị onye ọ bụla agaghị ahụ Onyenwe anyị.
Ịrịọ Chineke maka nri anyị na-eri kwa ụbọchị bụ ịrịọ maka ndokwa ime mmụọ ndị dị mkpa maka ụbọchị ahụ. Achịcha kwa ụbọchị na-agụnye ịnata òkè nke ọdịdị nke Chineke ka anyị na-edo onwe anyị n'okpuru mmetụta nke Chineke. Anyị na-abịakwute Chineke maka usoro nke Mụọ Nsọ anyị kwa ụbọchị ka anyị na-achọsi ike ịgbanye. Nri ime mmụọ na-abịa site n’okwu nke Chineke na site na mmeghari ohuru na mmụgharị n’ime Mụọ Nsọ. Dị ka ndị kwere ekwe, anyị nile na-eri otu nri ime mmụọ ma na-aṅụ otu ihe ọṅụṅụ nke mmụọ. (1Kọ 10:3-4) Anyị agaghị aṅụ mmanya kama jupụta na mmụọ nsọ. (Efe 5:18) Dị ka ebere Chineke si dị, anyị na-anata ịsa ahụ nke ịlọ ụwa na ime ka mmụọ nsọ dị ọhụrụ, nke a wụkwasịrị anyị n'ụba ugbu a site n'aka Jizọs Kraịst. (Tit 3:5-6). A na-awụba ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị site na Mụọ Nsọ nke e nyere anyị. (Ndị Rom 5:5)
Nsogbu na nchegbu anyị belatara, anyị nwere ike gafee ọnọdụ anyị ka anyị na -ezute Chineke ma na -agbanwe n'ọnọdụ nke uche na mmetụta anyị. A na -eme ka nke a dị mfe mgbe anyị na -eri okwu dị nsọ nke Chineke wee na -arụ ọrụ n'ime Mmụọ Nsọ. (1 Ndị Kọrịnt 14: 4) Ihe na -esi na izute Chineke apụta bụ na ike nke Chineke na -agbanwe anyị ma gbanwee obi anyị (na -ebute mkpụrụ nke mmụọ) na uche anyị (na -ebute mkpughe na mkpali). (Ndị Kọlọsi 3:10)
Anyị na-ewuli onwe anyị elu n'okwukwe dị nsọ site n'ikpe ekpere na Mmụọ Nsọ. ( Jud 1:20 ) Jehova bụ Mmụọ ahụ, ma ebe Mmụọ nke Onyenwe anyị dị, e nwere nnwere onwe. (2 Ndị Kọrịnt 3:17) Site n'inwe ebube nke Onyenwe anyị, a na-agbanwe anyị ka anyị bụrụ otu onyinyo ahụ site n'otu ogo nke ebube ruo n'ọzọ - n'ihi na nke a sitere na Onyenwe anyị, bụ Mmụọ. (2 Kọr. 3:18) Mgbe ndịozi ahụ kpere ekpere maka nkwuwa okwu, ha sịrị: “Nye ndị ohu gị ike ka ha nọgide na-ekwu okwu gị n’atụghị egwu, mgbe ị na-esetị aka gị ịgwọ ọrịa, a na-emekwa ihe ịrịba ama na ihe ebube n’aha gị. ohu Jizọs.” ( Ọrụ 4:29-30 ) Mgbe ha kpechara ekpere, ebe ha zukọtara maa jijiji, ha niile jupụtakwara na Mmụọ Nsọ wee nọgide na-ekwu okwu Chineke n’atụghị egwu. (Ọrụ 4:31)
Anyị ga-achụso ịhụnanya ma na-achọsi onyinye ime mmụọ ike, karịsịa ka anyị nwee ike ibu amụma. (1Kọ 14:1) Ọ dịghị amụma ọ bụla e site n’uche mmadụ wepụta, ma ndị mmadụ kwuru okwu sitere na Chineke mgbe mmụọ nsọ na-edu ha (2 Pita 1:21). E nwere ụdị onyinye dị iche iche, ma otu mmụọ ahụ; ma e nwere ozi dị iche iche, ma otu Onye-nwe; e nwekwara ọrụ dị iche iche, ma ọ bụ otu Chineke ahụ na-enye ha niile ike n’ime mmadụ niile. (1 Ndị Kọrịnt 12:4-6) E nyere onye ọ bụla ihe ngosi nke mmụọ nsọ maka ọdịmma mmadụ. (1Kọ 12:7) N'ihi na enyewo otù onye nime Mọ Nsọ okwu amamihe, nye kwa onye ọzọ okwu nke ihe-ọmuma dika Mọ ahu siri di, nye kwa onye ọzọ okwukwe site n'otù Mọ Nsọ, nye kwa onye ọzọ onyinye-inata-iru-ọma nke ime ka aru di n'otù Mọ Nsọ; nye ibe-ya ọlu ọlu-ebube, nye ibe-ya ibu-amuma, nye ibe-ya ike imata ihe di iche n'etiti ndi-mọ, nye ibe-ya asusu di iche iche, nye ibe-ya nkọwa nke asusu di iche iche. (1 Ndị Kọrint 12:8-10) Ihe ndị a nile na-enye ike site n’otu mmụọ ahụ, bụ́ onye na-eke onye ọ bụla n’otu n’otu otú ọ chọrọ. (1 Ndị Kọrịnt 12:11)
1 Ndị Kọrịnt 10: 3-4, Ha niile riri otu nri ime mmụọ
(ESV) 3 ha nile riri otu nri ime mmụọ ahụ, 4 ha nile dụkwara otu ihe ọ drinkụ spiritualụ ime mmụọ ahụ. N'ihi na ha dụrụ mmiri sitere na Nkume ime mmụọ nke sochiri ha, Nkume ahụ bụkwa Kraịst.
Ndị Efesọs 5:18, unu a getụkwala mmanya, kama jupụta na mmụọ nsọ
18 Unu a getụkwala mmanya, n'ihi na nke ahụ bụ ịkwa iko, kama jupụta na mmụọ nsọ.
(1 Ndị Kọrịnt 14:14) Ọ bụrụ na m na -ekpe ekpere n'asụsụ dị iche, mmụọ m na -ekpe ekpere
4 N'ihi na ọ bụrụ na m na -ekpe ekpere n'asụsụ dị iche, mmụọ m na -ekpe ekpere, ma uche m adịghị amị mkpụrụ.
Ndị Kọlọsi 3:10 (ESV), a na -eme ka ọ dị ọhụrụ dịka oyiyi nke onye okike ya si dị
10 ma yikwasịkwa mmadụ ọhụrụ ahụ, nke a na -eme ka ọ dị ọhụrụ na ihe ọmụma dịka onyinyo nke onye okike ya siri dị.
Jud 1: 20-21 (BV), Bnāwuli onwe -unu elu n'okwukwe -unu nke kachasi nsọ, n prayingkpe kwa ekpere nime Mọ Nsọ
20 Ma gị, ndị m hụrụ n'anya, na -ewuli onwe unu elu n'okwukwe gị nke kachasị nsọ ma na -ekpe ekpere n'ime mmụọ nsọ, 21 debe onwe -unu n'ịhụnanya nke Chineke, na -eche ebere nke Onye -nwe -anyị Jisọs Kraịst nke na -eduba na ndụ ebighi -ebi.
2 Ndị Kọrịnt 3: 17-18 (ESV), W.ebe Mọ nke Onye -nwe nọ, enwere onwe
17 Ugbu a Onyenwe anyị bụ Mmụọ, ebe Mmụọ nke Onyenwe anyị nọkwa, enwere nnwere onwe. 18 Na anyị niile, na -ekpughere ihu ya, na -ahụ ebube nke Onye -nwe, a na -agbanwe ya ka ọ bụrụ otu onyinyo ahụ site n'otu ogo ruo n'ọzọ. N'ihi na nke a sitere n'aka Onyenwe anyị bụ Mmụọ.
Ọrụ 4: 29-31 (NIV) Jupụta na Mmụọ Nsọ wee gaa n'ihu na -ekwu okwu Chineke n'atụghị egwu
29 Ma ugbu a, Onyenwe anyị, lee egwu ha na nye ndị odibo gị ka ha gaa n'ihu na -ekwu okwu gị n'atụghị egwu ọ bụla, 30 mgbe ị na -esetị aka gị iji gwọọ ọrịa, a na -emekwa ihe ịrịba ama na ihe ebube site n'aha ohu gị dị nsọ Jizọs. " 31 Mb whene ha kpesiri ekpere, ebe ebe ha zukọrọ mara jijiji, ha nile we juputa na Mọ Nsọ, we were nkwuwa -okwu n speakkwu okwu Chineke..
1 Ndị Kọrịnt 14: 1 (ESV), na -achọsi onyinye nke mmụọ ike, ọkachasị ka anyị wee buo amụma
1 Na -achụso ịhụnanya, chọsie ike na onyinye nile nke Mo Nso, karisiri ka unu we buru amuma.
2 Pita 1:21 (NIV) Ndị mmadụ kwuru okwu site na Chineke ka Mmụọ Nsọ na -edu ha
21 n'ihi na ebughị amụma ọ bụla site n'ọchịchọ nke mmadụ, mana ndị mmadụ kwuru okwu site na Chineke ka Mmụọ Nsọ na -edu ha.
1 Ndị Kọrịnt 12: 4-11. E nyere onye ọ bụla ngosi nke mmụọ nsọ maka ọdịmma niile
4 ugbu a onyinye di iche -iche di, ma ọ bu otù Mọ Nsọ ahu; 5 ụdị ozi dị iche iche dịkwa, mana otu Onyenwe anyị ahụ; 6 na ụdị ọrụ dị iche iche, mana ọ bụ otu Chineke ahụ na -enye ha ike n'ime mmadụ niile. 7 A na-enye onye nke ọ bụla ngosipụta nke Mmụọ Nsọ maka ezi ihe. 8 N'ihi na e nyere otu onye site na Mmụọ ikwu okwu amamihe, nyekwa onye ọzọ ikwupụta ihe ọmụma dịka otu Mmụọ ahụ si dị. 9 nye okwukwe ndi ozo site n'otu Mo ahu, nye onyinye ndi ozo site na Mo Nso, 10 nye onye ọzọ ọrụ ebube, nyekwa amụma ọzọ, nye onye ọzọ ike ịmata ọdịiche dị n'etiti mmụọ, nye onye ọzọ ụdị asụsụ dị iche iche, nye onye ọzọ nkọwa nke asụsụ. 11 Ihe ndị a niile na -enye ike site n'otu mmụọ nsọ, onye na -ekenye onye ọ bụla n'otu n'otu dịka ọ chọrọ.
Mgbe anyị na-arịọ Chineke ka ọ gbaghara anyị mmehie anyị, anyị na-ekweta na anyị bụ ndị mmehie chọrọ mgbaghara. Anyị na-abịaru Chineke nso site n’ime ka aka anyị dị ọcha na ime ka obi anyị dị ọcha. (Jems 4:8) Chineke na-emegide ndị mpako ma na-enye ndị dị umeala n’obi amara. (Jems 4:6) Kama iji àgwà ezi omume onwe onye na-abịaru Chineke nso, anyị na-adị umeala n’obi na-abịakwute Chineke— iru újú na ịkwa ákwá n’ihi mmebi iwu anyị. ( Jems 4:9 ) Ọ bụrụ na anyị eweda onwe anyị ala n’ihu Jehova, ọ ga-ebuli anyị elu. (Jems 4:10) Anyị aghaghị ikwu eziokwu banyere mmehie anyị ma kwupụta ha n’agbanyeghị ahụ́ erughị ala anyị n’ime otú ahụ. (1 Jọn 1:5-10) Anyị apụghị ịnọgide na-agọnahụ akụkụ nke onwe anyị na ndụ anyị ndị kwesịrị ịgbanwe. Ndị na-eche na ọ dịghị ihe ha na-achọghị aghọtaghị na ha nọ n’ahụhụ, nwee ọmịiko, ogbenye, kpuru ìsì, na ndị gba ọtọ. (Mkpu. 3:17) Anyị aghaghị ile onwe anyị anya nke ọma ka e wee ghara inwe ntụpọ. (Luk 6:41-42)
Chineke bụ ìhè, ọ dịghịkwa ọchịchịrị dị n'ime ya. (1 Jọn 1: 5) Ọ bụrụ na anyị asị na anyị na ya na -emekọ ihe mgbe anyị na -eje ije n'ọchịchịrị, anyị na -agha ụgha ma anyị anaghị eme eziokwu. (1 Jọn 1: 6) Ma ọ bụrụ na anyị na -eje ije n'ìhè, dị ka ọ nọ n'ìhè, anyị na ibe anyị na -enwe mmekọrịta, ọbara Jizọs Ọkpara ya na -asachapụ anyị mmehie niile. (1 Jọn 1: 7) Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na -aghọgbu onwe anyị, eziokwu adịghịkwa n'ime anyị. (1 Jọn 1: 8) Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na ịsachapụ anyị ajọ omume niile. (1 Jọn 1: 9) Ọ bụrụ na anyị asị na anyị emehieghị, anyị na -eme ya onye ụgha, okwu ya adịghị n'ime anyị. (1 Jọn 1:10)
Dịka anyị na -arụ ọrụ n'ime mmụọ, mkpughe ka ukwuu na -abịakwute anyị karịa n'oge anyị malitere ịbịaru Chineke nso n'ekpere. Nghọta dị na Mmụọ na -enye anyị nghọta nke ihe mgbochi na ihe mgbochi na njem anyị na Chineke. Nnukwu ihe mgbochi bụ mmehie na -emezughị emezi nke metụtara omume, ahụmịhe na mmekọrịta anyị na mbụ. Ọ dị oke mkpa idobe omimi nke onwe anyị ka inyocha site na Mụọ Nsọ. Nke a gụnyere ịchọ ebe n'ime obi na uche anyị nke nwere ibu iro na iwe. Ọtụtụ mgbe, nke a metụtara ndị mejọrọ anyị, mebie anyị, ghaara anyị ụgha, mebie ntụkwasị obi anyị, mebie nkwa anyị, jiri anyị mee ihe n'ụzọ na -ezighị ezi, mejọrọ anyị, kwutọọ anyị, ma ọ bụ mee ka anyị daa mba. Chineke chọrọ ka anyị na -eje ije na nnwere onwe na ndụ ọhụrụ, mana anyị ga -ebu ụzọ dozie enweghị mgbaghara, ịkpọasị na obi ilu ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị ahapụ obi anyị kpọrọ nkụ, Chineke ga -ewetara anyị ọgwụgwọ site n'ike nke Mmụọ ya. (Jemes 5: 15-16)
N'ihi na ọ bụrụ na ị na -agbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna gị nke eluigwe ga -agbagharakwa gị, mana ọ bụrụ na ị gbagharaghị ndị ọzọ njehie ha, Nna gị agaghịkwa agbaghara gị njehie gị. (Matiu 6: 14-15) Yabụ ọ bụrụ na ị na-enye onyinye gị n'ebe ịchụàjà (ekpere) wee cheta ebe ahụ na nwanne gị nwere ihe megide gị, hapụ onyinye gị ebe ahụ n'ihu ebe ịchụàjà gawa-buru ụzọ mee ka gị na nwanne gị dị n'udo, wee bịa nye onyinye gị. (Mat 5: 23-24) Anyị ga-ahapụrịrị iwe iwe niile, iwe, iwe, mkpu, na nkwutọ niile, yana obi ọjọọ niile. (Ndị Efesọs 4:31) Anyị ga -enwerịrị obiọma n'ebe ibe anyị nọ, nwee obi ọmịiko, na -agbaghara ibe anyị dịka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara anyị. (Ndị Efesọs 4:32) Dịka ndị nsọ na ndị m hụrụ n'anya, yikwasị obi ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ndidi, na-ediri ibe unu ihe ma na-agbaghara ibe ha; dị ka Onyenwe anyị gbaghaara gị, otu ahụ ka ị ga -esi gbaghara. (Ndị Kọlọsi 3: 12-13) Karịsịa ihe niile yikwasị ịhụnanya, nke na -ejikọ ihe niile na nkwekọ zuru oke. (Ndị Kọlọsi 3:14)
Ndị Rom 7: 14-25 (Abụ m onye anụ ahụ), onye erere n'okpuru mmehie-onye ajọ mmadụ ka m bụ
14 N'ihi na anyị maara na iwu bụ nke mmụọ, ma mu onwem bu nke anu -aru, onye ereworo n'okpuru nmehie. 15 N'ihi na anaghị m aghọta omume m. N'ihi na anaghị m eme ihe m chọrọ, mana ihe m kpọrọ asị ka m na -eme. 16 Ugbu a ọ bụrụ na m na -eme ihe m na -achọghị, ekwetara m n'iwu, na ọ dị mma. 17 Ya mere ugbu a, ọ bụghịzi m na -eme ya, kama ọ bụ mmehie bi n'ime m. 18 N'ihi na amaara m na ọ dịghị ezi ihe bi n'ime m, ya bụ, n'anụ ahụ m. N'ihi na enwere m agụụ ime ihe ziri ezi, mana ọ bụghị ike ime ya. 19 N'ihi na anaghị m eme ezi ihe m chọrọ, mana ihe ọjọọ nke m na -achọghị bụ ihe m na -eme. 20 Ugbu a ọ bụrụ na m na -eme ihe m na -achọghị, ọ bụghịzi m na -eme ya, kama ọ bụ mmehie bi n'ime m. 21 Ya mere achọpụtara m na ọ bụ iwu na mgbe m chọrọ ime ihe ziri ezi, ihe ọjọọ dị nso. 22 N'ihi na enwere m ọ delightụ n'iwu Chineke, n'ime ime m, 23 mana a na m ahụ n'ime ahụ m iwu ọzọ na -ebuso iwu nke uche m agha ma na -eme m ka m bụrụ onye mkpọrọ nye iwu nke mmehie nke bi n'ime akụkụ m. 24 Nwoke jọrọ njọ na m bụ! Onye ga -anapụta m n'ahụ nke ọnwụ a? 25 Ekele dịrị Chineke site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị! Ya mere, mụ onwe m ji uche m na -ejere iwu Chineke ozi, mana anụ ahụ m na -ejere iwu nke mmehie ozi.
(Jemes 4: 6-10) Sachaa aka unu, unu ndị mmehie, meekwanụ ka obi unu dị ọcha
6 Ma ọ na -enye amara. N'ihi ya, ọ na -ekwu, "Chineke na -emegide ndị mpako mana ọ na -enye ndị dị umeala n'obi amara. " 7 Ya mere donu onwe -unu n'okpuru Chineke. Guzogide ekwensu, ọ ga -agbapụkwa n'ebe unu nọ. 8 Bịaruonụ Chineke nso, ọ ga -abịarukwa unu nso. Meenụ ka aka unu dị ọcha, unu ndị mmehie, meekwanụ ka obi unu dị ọcha, unu ndị nwere uche abụọ. 9 Nwee nwute na iru uju ma kwaa akwa. Ka ọchichọ -unu ghọ iru -újú, ka ọ joyù -unu ghọ kwa ọchichiri. 10 Wedanụ onwe unu ala n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga -ebulikwa unu elu.
(1 John 1: 5-10) Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-aghọgbu onwe anyị, eziokwu adịghị n'ime anyị.
5 Nke a bụ ozi anyị nụrụ n'ọnụ ya ma kwusaara gị, na Chineke bụ ìhè, na ọchịchịrị adịghị n'ime ya ma ọlị. 6 Ọ bụrụ na anyị asị na anyị na ya nwere mmekọ mgbe anyị na -eje ije n'ọchịchịrị, anyị na -agha ụgha ma anyị anaghị eme eziokwu. 7 Ma ọ bụrụ na anyị na -eje ije n'ìhè, dị ka ọ nọ n'ìhè, anyị na -enwe mmekọrịta n'etiti onwe anyị, ọbara Jizọs Ọkpara ya na -asachapụ anyị mmehie niile. 8 Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na -aghọgbu onwe anyị, eziokwu adịghịkwa n'ime anyị. 9 Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na ịsachapụ anyị ajọ omume niile. 10 Ọ bụrụ na anyị asị na anyị emehieghị, anyị na -eme ya onye ụgha, okwu ya adịghịkwa n'ime anyị.
Mkpughe 3: 17 (NIV) N'amaghị na ị bụ onye ajọ ihe, onye nwere ọmịiko, ogbenye, onye ìsì, na onye gba ọtọ
17 n'ihi na ị na -asị, Abụ m ọgaranya, emeela m ọgaranya, ọ dịghịkwa m mkpa ọ bụla, n'amaghị na ị bụ onye ọjọọ, onye obi ebere, onye ogbenye, onye ìsì, na onye gba ọtọ.
(Luk 6: 41-42) Buru ụzọ wepụ osisi nke dị n'anya nke gị
41 Gịnị mere ị na -ahụ irighiri ahịhịa nke dị n'anya nwanna gị, mana ị hụghị osisi nke dị n'anya nke gị? 42 Olee otu ị ga -esi sị nwanne gị, 'Nwanne m, ka m wepụ irighiri ahịhịa nke dị n'anya gị,' ebe gị onwe gị na -ahụghị osisi nke dị n'anya nke gị? Onye ihu abụọ, buru ụzọ wepụ ntụhie dị n'anya nke gị, mgbe ahụ ị ga -ahụ nke ọma ka ị wepụ irighiri nke dị n'anya nwanna gị..
Jemes 5: 15-16 (Kwuo mmehie gị)
15 Ekpere nke okwukwe ga -azọpụtakwa onye na -arịa ọrịa, Onyenwe anyị ga -akpọlitekwa ya. Ọ bụrụkwa na o mere mmehie, a ga -agbaghara ya. 16 Ya mere, na -ekwupụtara ibe gị mmehie gị ma na -ekpekwa ekpere maka ibe gị, ka e wee gwọọ gị. Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu ka ọ na -arụ ọrụ.
(Matiu 6: 14-15) Ọ bụrụ na ị gbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna gị nke eluigwe ga-agbagharakwa gị
14 N'ihi na ọ bụrụ na ị na -agbaghara ndị ọzọ njehie ha, Nna gị nke eluigwe ga -agbagharakwa gị, 15 ma ọ bụrụ na unu agbagharaghị ndị ọzọ njehie ha, Nna unu agaghịkwa na -agbaghara unu njehie unu.
(Matiu 5: 21-24) Buru ụzọ mee ka gị na nwanne gị dị n'udo, wee bịa nye onyinye gị
21 “Unu nụrụ na a gwara ndị mgbe ochie, Egbula ọchụ; onye ọ bụla nke gburu mmadụ ga -ama ikpe. '' 22 Ma asim unu onye ọ bụla nke na -eweso nwanne ya iwe ga -ama ya ikpe; onye ọ bụla nke kparịrị nwanne ya ga -aza ajụjụ na kansụl; na onye ọ bụla nke na -asị, 'Onye nzuzu!' ga -atụba n'ọkụ ala mmụọ. 23 Ya mere, ọ bụrụ na ị na -enye onyinye gị n'ebe ịchụ aja wee cheta n'ebe ahụ na nwanne gị nwere ihe megide gị, 24 hapụ onyinye gị n'ebe ahụ n'ihu ebe ịchụàjà gawa. Buru ụzọ mee ka gị na nwanne gị dị n'udo, wee bịa nye onyinye gị.
Ndị Efesọs 4: 31-32 (ESV), Fna -agbaghara ibe unu, dịka Chineke gbaghaara unu n'ime Kraịst
31 Wepụnụ obi ilu niile na iwe na ọnụma na mkpu na nkwutọ, tinyere ihe ọjọọ niile.. 32 Nweenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, na -enwekwa obi ọmịiko, na -agbaghara ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu.
Ndị Kọlọsi 3: 12-14 Dị ka Onyenwe anyị gbaghaara gị, otu ahụ ka ị ga -esi gbaghara
12 Yikwasịnụ mgbe ahụ, dị ka ndị Chineke họpụtara, ndị dị nsọ na ndị m hụrụ n'anya, obi ọmịiko, obiọma, ịdị umeala n'obi, ịdị nwayọọ, na ndidi, 13 na -ediri ibe unu ihe, ma ọ bụrụ na mmadụ nwere mkpesa megide ibe ya, gbaghara ibe ya; dị ka Onyenwe anyị gbaghaara gị, otu ahụ ka ị ga -esi gbaghara. 14 Karịsịa ihe ndị a niile yikwasị ịhụnanya, nke na -ejikọ ihe niile na nkwekọ zuru oke.
Eduba anyị n'ọnwụnwa bụ ekpere ka anyị nọgide na-adị ọcha na ịdị nsọ ozugbo ike nke Chineke doro anyị nsọ ma mee ka anyị dị ọhụrụ. Ikpe ekpere maka ume iji guzogide ọnwụnwa bụ ihe Jizọs mesiri ike n’ikwu, sị, “Mmụọ Nsọ dị njikere, ma anụ ahụ́ adịghị ike.” ( Mak 14:38 ) Anyị na-agbalịsi ike ịnọgide na-erubere Chineke isi ma na-erube isi n’ihe Chineke na-achọ ka anyị ghara ịbụ ndị a na-emerụghị emerụ n’ụwa. ( Jems 1:27 ) A kpọrọ ndị Chineke hụrụ n’anya ka ha bụrụ “ndị senti” dị nsọ. (Ndị Rom 1:7) Site na Kraịst, anyị na-enwe ohere n'otu mmụọ nsọ nke Nna ka anyị ghara ịbụ ndị ọbịa na ndị ọbịa ọzọ, kama ụmụ amaala ibe anyị na ndị nsọ na ndị òtù ezinụlọ nke Chineke. (Efe 2:18-19) Anyị kwesịrị inyocha ihe niile—na-ejidesi ezi ihe ike, na-ezerekwa ụdị ihe ọjọọ ọ bụla. (1 Tesa. 5:20-21) N’ime otú ahụ, anyị na-esi n’ekpere nke ihe ndị dị anyị mkpa kpugheere anyị ná ndụ anyị na mgbanwe ndị e kwesịrị ime ná ndụ anyị na ihe ndị na-eme ka anyị ghara ịnọ n’ọnọdụ ndị a ga-anwa anyị. Anyị ekwesịghị ime mmụọ nsọ iwe site n'imegide mmetụta nke Chineke na-achị. (Ndị Efesọs 4:30)
Ekwela ka mmehie na -achị n'ime ahụ gị na -anwụ anwụ, ime ka ị rube isi n'ọchịchọ ya. (Ndị Rom 6:12) Ewezugala akụkụ ahụ gị ka ọ bụrụ mmehie dị ka ngwa nke ajọ omume - kama chee onwe gị n'ihu Chineke dịka ndị akpọlitere n'ọnwụ baa na ndụ, werekwa akụkụ gị nye Chineke dịka ngwa ọrụ nke ezi omume. (Ndị Rom 6:13) Ọ bụrụ na ị na -enyefe onwe gị nye onye ọ bụla dị ka ndị ohu na -erube isi, ị bụ ndị ohu nke onye ahụ ị na -erubere isi, ma ọ bụ mmehie, nke na -eduba n'ọnwụ, ma ọ bụ nrubeisi, nke na -eduga n'ezi omume. (Ndị Rom 6:16) Ekele dịrị Chineke, na unu bụbu ndị ohu mmehie sitere na obi na -erube isi n'ozizi nke enyere gị na ya, ebe a tọhapụrụ gị na mmehie, ị ghọrọ ndị ohu nke ezi omume . (Ndị Rom 6: 17-18) Dịka ị siri were were akụkụ ahụ gị nye ndị ohu nke adịghị ọcha na mmebi iwu nke na-ebute mmebi iwu karịa, ugbu a nyefee akụkụ ahụ gị ka ha bụrụ ndị ohu nke ezi omume na-eduga n'ịdị nsọ. (Ndị Rom 6:19)
Weda onwe-unu ala n'okpuru aka di ike nke Chineke, ka O we welie unu elu n'oge-Ya, nātukwasi kwa nchegbu-unu nile n'aru Ya, n'ihi na ọ nēcheb͕u unu n'obi. (1 Pita 5:6-7) Nwee uche ziri ezi; kpachara anya. Onye mmegide unu bụ́ ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa. (1 Pita 5:8) Guzosienụ ya ike, guzosie ike n’okwukwe unu, ebe ị maara na òtù ụmụnna unu na-enwe ụdị ahụhụ ndị ahụ n’ụwa niile. (1 Pita 5:9) Ma mb͕e unu taworo ahuhu nwa oge, Chineke nke amara nile, Onye kpọworo unu n'ebube ebighi-ebi Ya nime Kraist, gēweghachi unu, guzosie ike, wusie unu ike, me kwa ka unu guzosie ike. (1 Pita 5:10)
Ma anyị bụ́ ndị nke Chineke, anyị kwesịrị ịchụso ezi omume, nsọpụrụ Chineke, okwukwe, ịhụnanya, iguzosi ike, ịdị nwayọọ. (1 Tim 6:11) Lụọ ezi ọgụ ahụ nke okwukwe na-ejigide ndụ ebighị ebi nke a kpọrọ anyị. (1 Tim 6:12) Ka Chineke nke udo n’onwe ya doo unu nsọ kpam kpam, ka e debekwa mmụọ unu na mkpụrụ obi unu na ahụ unu dum n’enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta n’ọbịbịa nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. (1 Tesa. 5:23) Ekpere anyị kwesịrị ịbụ ka ịhụnanya anyị na-aba ụba nke ukwuu, n’ihe ọmụma na nghọta nile, ka anyị wee kwado ihe kasị mma, ka anyị wee dị ọcha na ndị na-enweghị ihe a ga-eji taa ụta maka ụbọchị Kraịst, jupụta ná mkpụrụ osisi. nke ezi omume. (Fil 1:9-11) Anyị aghaghị ịna-agbarịta ibe anyị ume ma ọ bụrụhaala na a na-akpọ ya “taa,” ka onye ọ bụla n’ime anyị ghara ịbụ onye aghụghọ nke mmehie ga-eme ka obi sie ya ike, n’ihi na anyị abịawo ikere òkè n’ime Kraịst, ma ọ bụrụ na anyị abịarute. n'ezie anyị na-ejidesi ntụkwasị obi mbụ anyị ike ruo ọgwụgwụ. (Hib 3:13-14)
(Mak 14:38) Na -echenụ nche, na -ekpekwanụ ekpere ka unu wee ghara ịba n'ọnwụnwa
38 Na -echenụ nche, na -ekpekwanụ ekpere ka unu wee ghara ịba n'ọnwụnwa. N'ezie, mmụọ dị njikere, mana anụ ahụ adịghị ike. "
Jemes 1:27 (NLT) Okpukpe dị ọcha - ka debe onwe gị na -enweghị isi n'ụwa
27 Okpukpe nke dị ọcha na nke a na -emerụghị emerụ n'ihu Chineke Nna bụ nke a: ileta ụmụ mgbei na ụmụ nwanyị di ha nwụrụ na mkpagbu ha, na idobe onwe gị n'enweghị ihe ọ bụla n'ụwa..
Ndị Rom 1: 7 (NIV), nye ndị niile ndị Chineke hụrụ n'anya ma kpọọ ka ha bụrụ ndị nsọ
7 Maka ndị ahụ niile na Rom ndị Chineke hụrụ n'anya ma kpọọ ka ha bụrụ ndị nsọ: Amara na udo si n'aka Chineke bụ Nna anyị na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.
Ndị Efesọs 2: 18-19 (ESV), unu bụ ụmụ amaala nke ndị nsọ na ndị ezinụlọ Chineke
18 N'ihi na site na ya anyị abụọ nwere ohere na otu mmụọ na Nna. 19 Ya mere unu abụkwaghị ndị ọbịa na ndị ọbịa, kama unu bụ ụmụ amaala nke ndị nsọ na ndị otu ezi na ụlọ nke Chineke,
(1 Ndị Tesalonaịka 5: 19-20) Unu emenyụla mmụọ nsọ
9 Unu menyu Mmụọ Nsọ. 20 Eledala amụma anya
Ndị Efesọs 4: 30-32 (ESV), ewutela mmụọ nsọ nke Chineke
30 na emela ihe wutere Mmụọ Nsọ nke Chineke, Onye esiri na unu kaa unu akara maka ụbọchị mgbapụta. 31 Wepụnụ obi ilu niile na iwe na ọnụma na mkpu na nkwutọ, tinyere ihe ọjọọ niile. 32 Nweenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, na -enwekwa obi ọmịiko, na -agbaghara ibe unu, dị ka Chineke n'ime Kraịst gbaghaara unu.
Ndị Rom 6: 10-11 (NIV)unu ga -ewere onwe unu dị ka ndị nwụrụ anwụ maka mmehie na ndị dị ndụ nye Chineke
10 Maka ọnwụ ọ nwụrụ, ọ nwụrụ maka mmehie, naanị otu ugboro, mana ndụ ọ na -adị, ọ na -adịrị Chineke. 11 Ya mere unu onwe -unu g considersikwa na unu bu ndi nwuru n'ebe nmehie di, na unu nādi ndu nime Chineke nime Kraist Jisus.
(Ndị Rom 6: 12-19) Ya mere, Lọt abụghị mmehie na-achị n'ime ahụ gị na-anwụ anwụ
12 Ya mere, ka mmehie ghara ịchị achị n'anụ ahụ gị na -anwụ anwụ, ime ka ị rubere agụụ agụụ ya isi. 13 Ewezugala akụkụ ahụ gị ka ọ bụrụ mmehie dịka ngwa nke ajọ omume, mana nyenu Chineke onwe -unu, dika ndi esiworo na ndi nwuru anwu bia na ndu, nye kwa ihe nile di unu n'aru Chineke dika ihe eji eme ezi omume. 14 N'ihi na mmehie agaghị enwe ike n'ahụ gị, ebe ọ bụ na ị nọghị n'okpuru iwu kama n'okpuru amara. 15 Gịnịzi? Ànyị ga -emehie n'ihi na anyị anọghị n'okpuru iwu kama n'okpuru amara? Ọ dịghị ma ọlị! 16 Ọ bụ na unu amaghị na ọ bụrụ na unu na -enyefe onwe unu onye ọ bụla dị ka ndị ohu na -erube isi, unu bụ ndị ohu nke onye ahụ unu na -erubere isi, ma ọ bụ nke mmehie, nke na -eduba n'ọnwụ, ma ọ bụ nke nrubeisi, nke na -eduba n'ezi omume? 17 Ma ekele dịrị Chineke, na unu bụbu ndị ohu mmehie jiri obi unu na -erube isi n'ozizi nke e nyefere unu n'aka, 18 ebe a tọhapụrụkwa ha na mmehie, bụrụ ndị ohu nke ezi omume. 19 Ana m ekwu dị ka mmadụ si dị, n'ihi oke adịghị ike gị. N'ihi na dị nnọọ ka i chepụtara akụkụ ahụ gị otu oge dị ka ndị ohu nke adịghị ọcha na mmebi iwu nke na -ebute mmebi iwu karịa, ugbu a chee akụkụ ahụ gị dị ka ndị ohu nke ezi omume na -eduga n'ịdị nsọ.
1 Jọn 1: 5-10. Chineke bu ìhè, ọ dighi kwa ọchichiri di nime Ya
5 Nke a bụ ozi anyị nụrụ n'ọnụ ya wee kwusaara gị, nke ahụ Chineke bu ìhè, ọ dighi kwa ọchichiri di nime Ya. 6 Ọ bụrụ na anyị asị na anyị na ya nwere mmekọ mgbe anyị na -eje ije n'ọchịchịrị, anyị na -agha ụgha ma anyị anaghị eme eziokwu. 7 Ma ọ bụrụ na anyị na -eje ije n'ìhè, dị ka ọ nọ n'ìhè, anyị na -enwe mmekọrịta n'etiti onwe anyị, ọbara Jizọs Ọkpara ya na -asachapụ anyị mmehie niile. 8 Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na -aghọgbu onwe anyị, eziokwu adịghịkwa n'ime anyị. 9 Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị na ịsachapụ anyị ajọ omume niile. 10 Ọ bụrụ na anyị asị na anyị emehieghị, anyị na -eme ya onye ụgha, okwu ya adịghịkwa n'ime anyị.
Ndị Rom 6: 12-19 Ka mmehie ghara ịchị n'ime ahụ gị pụrụ ịnwụ anwụ
12 Ya mere, ka mmehie ghara ịchị achị n'anụ ahụ gị na -anwụ anwụ, ime ka ị rubere agụụ agụụ ya isi. 13 Ewezugala akụkụ ahụ gị ka ọ bụrụ mmehie dị ka ngwa nke ajọ omume, kama chee onwe gị n'ihu Chineke dị ka ndị a kpọlitere n'ọnwụ baa na ndụ, werekwa akụkụ gị nye Chineke dịka ngwa maka ezi omume.. 14 N'ihi na mmehie agaghị enwe ike n'ahụ gị, ebe ọ bụ na ị nọghị n'okpuru iwu kama n'okpuru amara. 15 Gịnịzi? Ànyị ga -emehie n'ihi na anyị anọghị n'okpuru iwu kama n'okpuru amara? Ọ dịghị ma ọlị! 16 Ị maghị nke ahụ ọ bụrụ na unu na -enyefe onwe unu nye onye ọ bụla dị ka ndị ohu na -erube isi, unu bụ ndị ohu nke onye ahụ unu na -erubere isi, ma ọ bụ mmehie, nke na -eduba n'ọnwụ, ma ọ bụ nrubeisi, nke na -eduga n'ezi omume.? 17 ma ekele dịrị Chineke, na unu bụbu ndị ohu mmehie sitere nʼobi unu na -erube isi na ụkpụrụ izizi nke e nyefere unu n'aka, 18 ebe a tọhapụrụkwa ha na mmehie, bụrụ ndị ohu nke ezi omume. 19 Ana m ekwu dị ka mmadụ si dị, n'ihi oke adịghị ike gị. Maka dị nnọọ ka i chetara akụkụ ahụ gị otu mgbe dị ka ndị ohu nke adịghị ọcha na mmebi iwu nke na -ebute mmebi iwu karịa, ugbu a, nyefee akụkụ ahụ gị ka ha bụrụ ndị ohu nke ezi omume na -eduga n'ịdị nsọ..
(1 Pita 5: 6-10) Ekwensu na -agbagharị dị ka ọdụm na -ebigbọ ebigbọ, na -achọ onye ọ ga -eripịa
6 Ya mere wedanụ onwe unu ala n'okpuru aka dị ike nke Chineke ka o wee bulie unu elu n'oge ya, 7 na -atụkwasịnụ ya nchegbu unu niile, n'ihi na ihe banyere unu na -emetụ ya n'obi. 8 Nwee uche zuru oke; mụrụ anya. Onye mmegide gị ekwensu na -agbagharị dị ka ọdụm na -ebigbọ ebigbọ, na -achọ onye ọ ga -eripịa. 9 Guzogide ya, guzosie ike n'okwukwe gị, ebe ị matara na ụdị ahụhụ a bụ otu ụmụnna na -enwe n'ụwa niile. 10 Ma mgbe ị tasịrị ahụhụ nwa oge, Chineke nke amara niile, onye kpọrọ gị ka ọ bịa n'ebube ebighi ebi ya n'ime Kraịst, ga -eweghachi gị, kwado gị, mee gị ike ma mee ka ị guzosie ike.
(Gụọ 1 Timoti 6: 11-12.) Na -achụso ezi omume, nsọpụrụ Chineke, okwukwe, ịhụnanya, ntachi obi, ịdị nwayọọ
11 Ma gi onwe -gi, onye nke Chineke, b fleeanari ihe ndia. Na -achụso ezi omume, nsọpụrụ Chineke, okwukwe, ịhụnanya, ntachi obi, ịdị nwayọọ. 12 Lụọ ezi ọgụ nke okwukwe. Jide ndụ ebighi ebi nke akpọrọ gị banyere nke i kwupụtara ezi ihe n'ihu ọtụtụ ndị akaebe.
1 Ndị Tesalonaịka 5: 23-24 (ESV), MKa e debe mmụọ gị niile na mkpụrụ obi gị na ahụ gị enweghị ntụpọ
23 Ugbu a, ka Chineke nke udo n'onwe ya doo unu nsọ kpamkpam, ka e debe mmụọ na mkpụrụ obi na ahụ gị niile ka ọ ghara ịta ụta n'ọbịbịa nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.. 24 Onye na -akpọ gị kwesịrị ntụkwasị obi; ọ ga -eme ya.
Ndị Filipaị 1: 9-11 (BV), Be dị ọcha na enweghị ụta maka ụbọchị Kraịst
9 na ọ bụ ekpere m ka ịhụnanya unu wee na -amụba karịa, jiri ihe ọmụma na nghọta niile, 10 ka unu we kwado ihe kachasi nma, ka unu we di ọcha, buru kwa ndi anāpughi ibo ebubo nye ubọchi Kraist, 11 juputa na nkpuru nke ezi omume nke sitere na Jisus Kraist, inye Chineke otuto na otuto.
Ndị Hibru 3: 13-14 (ESV), Ọ bụrụ anyị na -ejidesi ntụkwasị obi mbụ anyị ike ruo ọgwụgwụ
13 Ma na -agbarịta ibe unu ume kwa ụbọchị, ọ bụrụhaala na a na -akpọ ya “taa,” ka aghụghọ nke mmehie ghara ime onye ọ bụla n'ime unu. 14 N'ihi na anyị bịara isoro Kraịst keta oke, ọ bụrụ n'ezie na anyị na -ejigide ntụkwasị obi mbụ anyị ruo ọgwụgwụ.
Enwere ụzọ abụọ nke ikpe ekpere: ikpe ekpere n'asụsụ dị iche iche na iji uche anyị na-ekpe ekpere. Gịnị ka anyị ga-eme? Anyị ga-ekpe ekpere n’ime mmụọ anyị, ma werekwa uche anyị kpee ekpere; anyị ga-eji mmụọ anyị na-abụ abụ otuto, ma werekwa uche anyị na-abụ abụ. (1Kọ 14:15) Ikwu okwu n’asụsụ bụ ikpe ekpere n’ụzọ nke na ị na-ekwu okwu na-adịghị nghọta. (1Kọ 14:9) Mgbe ị na-ekpe ekpere n’asụsụ dị iche iche, mmụọ gị na-ekpe ekpere ma uche gị adịghị amị mkpụrụ. (1Kọ 14:14) Ikwu okwu n’asụsụ na-ewuli onwe gị elu na mmụọ nsọ. (1 Ndị Kọrịnt 14:4) Ọ bụ ọrụ nke ịgwa onwe gị na Chineke okwu ‘ikwupụta ihe omimi n’ime mmụọ nsọ. (1 Ndị Kọrint 14:2) Ime otú ahụ bụ ire onyinye eluigwe ire na ikere òkè na Mmụọ Nsọ, ikere òkè n’okwu ndị mara mma nke Chineke. (Hib 6:4-5) Ihe ọzọ e nwere n’ịṅụbiga mmanya ókè bụ iji mmụọ nsọ ‘iji obi anyị na-abụ abụ ma na-abụ abụ nye Onyenwe anyị. (Ndị Efesọs 5:18-19)
Pọl, mgbe ọ na -agwa ọgbakọ Kọrịnt okwu, dere, "Achọrọ m ka unu niile na -asụ asụsụ dị iche iche." (1 Ndị Kọrịnt 14: 5) Ọ sịrị, "Ana m ekele Chineke na m na -asụ asụsụ karịa unu niile." (1 Ndị Kọrịnt 14:18) Mmụọ ahụ (mmetụta nchịkwa Chineke) na -enyere anyị aka n'adịghị ike anyị. N'ihi na anyị amaghị ihe anyị ga -ekpe ekpere dịka anyị kwesịrị, mana Mmụọ na -arịọchitere anyị arịrịọ site n'ịsụ ude nke ukwuu maka okwu. (Ndị Rom 8:26) Ihe na -enyocha obi maara ihe uche nke mmụọ bụ, n'ihi na mmụọ na -arịọchitere ndị nsọ arịrịọ dịka uche Chineke si dị. (Ndị Rom 8:27) A na -agba anyị ume ka anyị jiri ekpere na arịrịọ niile na -ekpe ekpere mgbe niile n'ime mmụọ. (Ndị Efesọs 6:18) Anyị ga -ewulite onwe anyị n'okwukwe anyị kachasị nsọ ma na -ekpe ekpere n'ime mmụọ nsọ, na -edebe onwe anyị n'ịhụnanya Chineke. (Jud 1: 20-21)
Enyere onye ọ bụla ihe ngosi nke mmụọ nsọ maka ọdịmma ọha. (1Kọ 12:7) Anyị ga-achụso ịhụnanya, na-achọsikwa ike nye onyinye ime mmụọ, karịsịa ka anyị nwee ike ibu amụma. (1 Ndị Kọrịnt 14:1) Onye na-ekwu okwu n’asụsụ dị iche na-ewuli onwe ya elu, ma onye na-ebu amụma na-ewuli ọgbakọ elu. (1Kọ 14:4) Mgbe anyị na-ebu amụma, anyị na-ekwu site na Chineke dị ka mmụọ nsọ na-edu. (2 Pita 1:21) Anyị niile kwesịrị ịchọ ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche, ọbụnakwa karịa ibu amụma. (1 Kọr. 14:5) Unu egbochila ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche ma nwee ọchịchọ siri ike ibu amụma. (1Kọ 14:39) Chineke na-agba akaebe site n'ihe ịrịba ama na ihe ebube na ọrụ ebube dị iche iche na onyinye nke mmụọ nsọ nke ekesara dị ka uche ya si dị. (Hib 2:4) E kwesịghị izisa ozi ọma n'okwu naanị kama n'ike na n'ime mmụọ nsọ na n'ikwenye zuru oke. (1 Tesa. 1:5) Anyụla mmụọ nsọ. (1 Tesa. 5:19) Eledala amụma anya. (1 Tesa. 5:20) Na-anwale ihe niile jidesie ezi ihe ike. (1 Tesa. 5:21)
Ndị Rom 8: 26-27 (Mkpu), Mmụọ na-arịọchitere anyị arịrịọ na ịsụ ude nke ukwuu maka okwu
26 N'otu aka ahụ Mmụọ nsọ na -enyere anyị aka n'adịghị ike anyị. N'ihi na anyị amaghị ihe anyị ga -arịọ maka ya dị ka anyị kwesịrị, mana Mmụọ n'onwe ya na -arịọchitere anyị arịrịọ site n'ịsụ ude miri emi maka okwu.. 27 Na onye na -enyocha obi maara ihe bụ uche nke Mmụọ, n'ihi na Mmụọ na -arịọrọ ndị nsọ arịrịọ dịka uche Chineke si dị.
1 Ndị Kọrịnt 12: 7, Onye ọ bụla ka e nyere ngosipụta nke mmụọ nsọ
7 E nyere onye ọ bụla ngosi nke mmụọ nsọ maka ọdịmma niile.
(1 Ndị Kọrịnt 14: 1) Na -achụso ịhụnanya, na -achọkwa onyinye mmụọ
1 Na -achụso ịhụnanya, na -achọsi ike onyinye ime mmụọ, karịsịa ka unu wee buo amụma.
1 Ndị Kọrịnt 14: 2, Onye na -ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche na -agwa Chineke okwu - ọ na -ekwu ihe omimi na mmụọ.
2 n'ihi na onye na -ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche anaghị agwa mmadụ okwu kama ọ na -agwa Chineke okwu; n'ihi na ọ dịghị onye na -aghọta ya, mana ọ na -ekwu ihe omimi na Mmụọ.
(1 Ndị Kọrịnt 14: 4) Onye na -ekwu okwu n'asụsụ dị iche na -ewuli onwe ya elu
4 Onye na -ekwu okwu n'asụsụ dị iche na -ewuli onwe ya elu, ma onye na -ebu amụma na -ewuli ọgbakọ elu.
(1 Ndị Kọrịnt 14: 5) Achọrọ m ka unu niile na -asụ asụsụ dị iche iche
5 ugbu a Achọrọ m ka unu niile na -asụ asụsụ dị iche iche, ma ọ bụ karịa karịa ibu amụma.
(1 Ndị Kọrịnt 14: 9) Jiri ire gị na -ekwu okwu nke a na -enweghị ike ịghọta
9 Yabụ na onwe gị, ọ bụrụ i ji ire gị na -ekwu okwu na -enweghị nghọta, kedu ka mmadụ ga -esi mara ihe ekwuru? N'ihi na ị ga na -ekwu okwu n'ime ikuku.
(1 Ndị Kọrịnt 14:14) Ọ bụrụ na m na -ekpe ekpere n'asụsụ dị iche, mmụọ m na -ekpe ekpere mana uche m adịghị amị mkpụrụ
14 n'ihi na ọ bụrụ na m na -ekpe ekpere n'asụsụ dị iche, mmụọ m na -ekpe ekpere mana uche m adịghị amị mkpụrụ.
(1 Ndị Kọrịnt 14:15) M ga -eji mmụọ m kpee ekpere, ma m ga -ejikwa uche m kpee ekpere
15 Kedu ihe m ga -eme? M ga -eji mmụọ m kpee ekpere, ma m ga -ejikwa uche m kpee ekpere; M ga -eji mmụọ m bụọ abụ otuto, ma m ga -eji obi m bụọ abụ.
(1 Ndị Kọrịnt 14:18) Ana m ekele Chineke na m na -asụ asụsụ karịa unu niile
18 Ana m ekele Chineke na m na -asụ asụsụ karịa unu niile.
1 Ndị Kọrint 14:28 (ESV), Lna ha na -agwa onwe ya na Chineke okwu.
28 Ma ọ bụrụ na ọ nweghị onye na -akọwa ya, ka onye ọ bụla n'ime ha gbachi nkịtị n'ime ụka wee gwa onwe ya na Chineke okwu.
1 Ndị Kọrịnt 14:39 Akwụsịla ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche
39 Ya mere, ụmụnna m, na -achọsi ike ibu amụma, egbochila ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche.
Ndị Hibru 6: 4-5 (NW), detụrụ ire okwu Chineke mara mma na ike nke ụwa na-abịa
4 N'ihi na ọ gaghị ekwe omume, n'ihe banyere ndị enwetela nghọta, ndi detụrụ onyinye nke elu -igwe ire, ma soro keta oke na Mụọ Nsọ, 5 ha edetụwo ire ịdị mma nke okwu Chineke na ike nke ụwa na -abịa aka
Ndị Efesọs 5: 18-19 (ESV), unu ańụbigala mmanya ókè, kama jupụta na mmụọ nsọ
18 na a getụkwala mmanya, n'ihi na nke ahụ bụ ịkwa iko, kama juputa na Mọ Nsọ, 19 nwere abụ ọma na ukwe na abụ nke mmụọ na -agwa ibe unu okwu, jiri obi gị na -abụ abụ ma na -abụku Jehova abụ olu ụtọ,
Ndị Efesọs 6: 17-18 (ESV), Pna -akpọlite ​​n'ime mmụọ oge niile
17 were kwa okpu-agha nke bu nzọputa, ya na mma-agha nke Mọ Nsọ, nke bu okwu Chineke. 18 na -ekpe ekpere oge niile n'ime Mmụọ, jiri ekpere na arịrịọ niile. Iji mee nke a, jiri ntachi obi niile mụrụ anya, na -arịọsiri ndị nsọ niile arịrịọ ike,
Jud 1: 20-21 (ESV), wulite onwe gị elu-pịzụlite na Mmụọ Nsọ
2 Pita 1:21 (Mkpu) Ndị mmadụ kwuru okwu dịka Chukwu ka Mmụọ Nsọ na -edu ha
21 N'ihi na ọ dịghị amụma emepụtara site n'ọchịchọ mmadụ, ma ndị mmadụ kwuru okwu site na Chineke mgbe Mụọ Nsọ na -edu ha.
1 Ndị Tesalonaịka 1: 5 (ESV), n'ike na mmụọ nsọ na nkwenye siri ike
5 n'ihi na ozi ọma anyị bịakwutere unu ọ bụghị naanị n'okwu, kamakwa n'ike na mmụọ nsọ na nkwenye siri ike.
(1 Ndị Tesalonaịka 5: 19-21) Unu emenyụla mmụọ nsọ
19 Unu menyu Mmụọ Nsọ. 20 Eledala amụma anya, 21 ma nwalee ihe niile; jidesienụ ihe ọma ike.
Ndị Hibru 2: 4 (NIV) Chineke gbakwara ama site n'onyinye nke Mmụọ Nsọ ekesa dị ka uche ya si dị
4 mgbe Chineke gbakwara ama site na ihe iriba ama na ọrụ ebube na ọrụ ebube dị iche iche na site na onyinye nke Mmụọ Nsọ ekesa dịka uche ya siri dị.
N’ebe ọ bụla ndị mmadụ ga-ekpe ekpere, na-ebuli aka dị nsọ elu n’enweghị iwe ma ọ bụ esemokwu. ( 1 Tim 2:8 ) Ka ndị na-ata ahụhụ na-ekpe ekpere. Ka ndị na-aṅụrị ọṅụ bụrụ abụ otuto. ( Jem 5:13 ) Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-arịa ọrịa, ya kpọkuo ndị okenye ọgbakọ, ka ha kpeekwa ekpere n’isi ha, werekwa mmanụ tee ha mmanụ n’aha Onyenwe anyị. ( Jems 5:14 ) Ekpere nke okwukwe ga-azọpụtakwa ndị ahụ na-arịa ọrịa, Jehova ga-akpọlitekwa ha, a ga-agbagharakwa ha mmehie ha. (Jems 5:15) Ekwupụtaara ibe unu mmehie unu ma kpee ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu—ekpere onye ezi omume nwere ike dị ukwuu ka ọ na-arụ ọrụ. (Jems 5:16)
Unu echegbula onwe unu n’ihe ọ bụla, kama n’ihe niile, were ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele mee ka Chineke mara ihe unu na-arịọ. (Fil 4:6) Udo nke Chineke, nke kariri nghọta nile, ga-echekwa obi unu na echiche-unu nche nime Kraist Jisus. (Fil 4:7) Ọ dịghị ihe anyị na-eri nke a ga-ajụ ma ọ bụrụ na e ji ekele nara ya, n’ihi na e mere ya nsọ site n’okwu Chineke na ekpere. (1 Tim 4:4-5) Di na nwunye ekwesịghị ịnapụ ibe ha ma eleghị anya site ná nkwekọrịta ruo nwa oge, ka ha nwee ike itinye onwe ha n'ekpere. (1 Ndị Kọrịnt 7:3-5)
Unu adịkwala umengwụ na ịnụ ọkụ n'obi, na -anụ ọkụ n'obi na mmụọ, na -ejere Onyenwe anyị ozi, na -a rejoiceụrị ọ inụ n'olileanya, na -enwe ndidi na mkpagbu, na -ekpekwa ekpere mgbe niile. (Ndị Rom 12: 11-12) Nọgidesie ike n'ekpere, jiri nche na-eche nche n'ime ya. (Kọl 4: 2) Na -ajoụrịnụ ọ alwaysụ mgbe niile, na -ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị, na -enye ekele n'ọnọdụ niile; n'ihi na nka bu uche Chineke nime Kraist Jisus n'ebe unu nọ. (1Te 5: 16-18) Unu emenyula mmụọ nsọ. (1Thess 5:19) Were mma agha nke mmụọ nsọ, nke bụ okwu Chineke, jiri ekpere na arịrịọ niile na -ekpe ekpere mgbe niile na mmụọ. (Ndị Efesọs 6: 17-18) Ndị m hụrụ n'anya, wulie onwe gị elu n'okwukwe gị nke kachasị nsọ wee kpee ekpere na Mmụọ Nsọ, debe onwe gị n'ịhụnanya Chineke, na-eche ebere nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst nke na-eduga na ndụ ebighi ebi. (Jud 1: 20-21)
1 Timoti 2: 8 (NIV)n ebe ọ bụla ụmụ nwoke kwesịrị ikpe ekpere, na -ewelite aka nsọ
8 Ọ na -agụ m agụụ ka ndị ikom na -ekpe ekpere ebe ọ bụla, na -eweli aka nsọ elu n'eweghị iwe na esemokwu
Jemes 5: 13-18 (KJV), na-ekpekwa ekpere maka ibe unu
13 Ọ̀ dị onye ọ bụla n'etiti unu na -ahụju anya? Ka ọ na -ekpe ekpere. Ọ dị onye ọ bụla na -aerụrị ọ ?ụ? Ka ọ bụọ abụ otuto. 14 Anyone nwere onye ọ bụla n'etiti unu na -arịa ọrịa? Ka ọ kpọọ ndị okenye ụka, ka ha kpeekwara ya ekpere, tee ya mmanụ n'aha Onyenwe anyị.. 15 Ekpere nke okwukwe ga -azọpụtakwa onye na -arịa ọrịa, na Onyenwe anyị ga -akpọlite ​​ya. Ọ bụrụkwa na o mere mmehie, a ga -agbaghara ya. 16 Ya mere, kwupụtanụ mmehie unu nye ibe unu na na -ekpekwaranụ ibe unu ekpere, ka a gwọọ unu. Ekpere nke onye ezi omume nwere ike dị ukwuu ka ọ na -arụ ọrụ. 17 Ịlaịja bụ nwoke nwere ọdịdị dị ka nke anyị, o wee kpesie ekpere ike ka mmiri ghara izo, mmiri ezoghị n'elu ụwa ruo afọ atọ na ọnwa isii. 18 O kpekwara ekpere ọzọ, eluigwe wee mee ka mmiri zoo, ala wee mịa mkpụrụ ya.
(Ndị Filipaị 4: 6-7)n ihe niile by ekpere na ịrịọ arịrịọ na ekele
6 ẹk anxioustịmede esịt ke baba n̄kpọ kiet, edi n'ihe nile site n'ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na -arịọ. 7 Udo nke Chineke, nke kachasi uche nile, g willche kwa obi -unu na èchìchè -uche -unu nche nime Kraist Jisus.
1 Timoti 4: 4-5 (NIV)Eji okwu Chineke na ekpere mee ka ọ dị nsọ
4 N'ihi na ihe niile Chineke kere dị mma, ọ dịghịkwa ihe a ga -ajụ ma ọ bụrụ na ejiri ekele na -anabata ya, 5 n'ihi na e ji okwu Chineke na ekpere mee ya nsọ.
1 Ndị Kọrịnt 7: 3-5 (ESV), na-anapụkwanụ ibe unu ihe ka unu wee tinye onwe unu na ekpere
3 Di kwesịrị inye nwunye ya ikike nke ọlụlụ ya, nyekwa nwunye ya di ya. 4 N'ihi na nwunye enweghị ikike n'ahụ nke ya, mana di ya nwere ikike. N'otu aka ahụ, di enweghị ikike n'ahụ ya, mana nwunye nwere ikike. 5 Unu anatala ibe unu ihe, ewezuga ikekwe site na nkwekọrịta nwa oge, ka unu wee tinye onwe unu n'ekpere; ma mgbe ahụ bịakọta ọnụ ọzọ, ka Setan ghara ịnwa gị ọnwụnwa n'ihi enweghị njide onwe onye gị
(Ndị Rom 12: 11-12) Na-ekpe ekpere mgbe niile
11Unu adịkwala umengwụ n'ịnụ ọkụ n'obi, nweenụ mmụọ n'ime mmụọ, na -ejere Onyenwe anyị ozi. 12 Na -ajoụrị ọ inụ n'olileanya, nwee ndidi na mkpagbu, na -ekpe ekpere mgbe niile.
Ndị Kọlọsi 4: 2, Nọgidesie ike n'ekpere, na -echenụ nche na ya
2 Nọgidesie ike n'ekpere, jiri nche na -eche nche n'ime ya.
1 Ndị Tesalonaịka 5: 16-22 Kpee ekpere n'akwụsịghị akwụsị- unu emenyula Mọ Nsọ
16 Na -ajoụrị ọ alwaysụ mgbe niile, 17 na -ekpe ekpere n'akwụsịghị akwụsị, 18 nye ekele n'ọnọdụ niile; n'ihi na nka bu uche Chineke nime Kraist Jisus n'ebe unu nọ. 19 Unu menyu Mmụọ Nsọ. 20 Eledala amụma anya, 21 ma nwalee ihe niile; jidesienụ ihe ọma ike. 22 Zere ụdị ihe ọjọọ ọ bụla.
Ndị Efesọs 6: 17-19 (ESV), Pna -akpọlite ​​n'ime mmụọ oge niile
17 werekwanụ okpu agha nke nzọpụta, na mma -agha nke Mọ Nsọ, nke bu okwu Chineke, 18 na -ekpe ekpere oge niile n'ime Mmụọ, jiri ekpere na arịrịọ niile. Iji mee nke a, jiri ntachi obi niile mụrụ anya, na -arịọsiri ndị nsọ niile arịrịọ ike, 19 na kwa maka m, ka e nye m okwu imeghe ọnụ m n’atụghị egwu ịkpọsa ihe omimi nke ozi-ọma,
Jud 1: 20-21 (NIV) Na -ewuli onwe unu elu ma na -ekpe ekpere n'ime Mmụọ Nsọ